သဒ်ဒါလှနျတဏှာကြှံ – My Blog
အလှနျခြောလှတဲ့ ကောငျမလေး သုံးယောကျ အကွောငျးကို အရငျဆုံး ပွောပွလိုသညျ ။ သူတို့ကတော့ ဘှဲ့…..မှူးအိမျနဲ့ တိမျဂှမျး တို့ပါဘဲ ။ ပထမဆုံး ပွောပွလိုတာက ဘှဲ့….ရဲ့ အကွောငျး ။ နံမညျ အပွညျ့အစုံက ဘှဲ့ထူးမောငျမောငျ ။ အငျမတနျလှတဲ့ ကောငျမလေး…။ ဆှတျဆှတျဖွူတဲ့ အသားနဲ့ မကျြလုံး ဝိုငျးဝိုငျးနကျနကျကွီးတှနေဲ့ ဆံပငျရှညျ မဲမဲဖွောငျ့ဖွောငျ့သနျသနျတှကွေောငျ့ မိနျးကလေးတှေ ကွားထဲ ထငျးနဝေငျးနတေဲ့ ကောငျမလေး ။ ကိုယျလုံးက တောငျ့တောငျ့ထညျထညျကွီး မဟုတျပမေယျ့ ရှိသငျ့တာတှေ လိုအပျသလောကျ ရှိသညျ ။ ရငျမို့မို့က အမွဲ အသားပြော့ပြော့ အကငြ်္ီတှကေို ဝတျတတျလို့ သိပျမ ကွီးပမေယျ့ သိသိသာသာ လှနသေညျ ။ ခါးလေးက သေးသညျ ။ တငျတှကေ သိပျမကွီး မကားပမေယျ့ လှသညျ ။ ရုပျလှရုံတငျ မက စာတျောလို့ရယျ ဘှဲ့ အဖကေ နံမညျကွီး ပုဂ်ဂိုလျကွီး တယောကျမို့ရယျကွောငျ့ လူသိမြား နံမညျကွီးသညျ ။ ဘှဲ့က ကြောငျးမှာ လမျးလြှောကျရငျ ခေါငျးကိုငုံ့ပွီး မွနျမွနျ သှကျသှကျ လြှောကျတတျသညျ ။ ဘှဲ့ကွောငျ့ မှူးအိမျနဲ့ တိမျဂှမျး တို့လညျး လမျးလြှောကျတာ မွနျလာကွသညျ ။
သူတို့ သုံးယောကျသညျ သညျလို သှကျသှကျလမျးလြှောကျ ကွတာကွောငျ့လညျး လူတှကေ ပို သတိထားမိကွသညျ ။ သတိထားမိကွတော့ နံမညျကွီးလာသညျ ။ အရှိုငျးစား ဝတျထားတဲ့ ကောငျမလေး သုံးယောကျ သညျ တက်ကသိုလျ အမြိုးမြိုးက ကိုကိုကာလသားတှေ အတှကျ ပွောစရာလေးတခု ဖွဈလာ သညျ ။ ဘှဲ့တို့ သုံးယောကျကို မမွငျဘူးလို့ တခွားတက်ကသိုလျတှကေ ကြောငျးသားတှကေ လာကွညျ့ကွရသညျ ။ ကြောငျးသားအမြားစုရဲ့ စိတျကူးအိပျမကျ တှထေဲမှာ ဘှဲ့တို့ သုံးယောကျ နှဈအတနျကွာ ရှိနခေဲ့သညျ ။ ဘှဲ့တို့ အုပျစုမှာ ဘှဲ့က အလှဆုံး အခြောဆုံးလို့ ကြောငျးနဖေကျ ယောကျြားလေးတှကေ သတျမှတျတာကို ခံရသညျ ။ ဘှဲ့ ထငျတာကတော့ ဘှဲ့တို့ အဖှဲ့မှာ မှူးအိမျရော တိမျဂှမျးရော အားလုံး ဘှဲ့လိုဘဲ လှကွသညျလို့ ။ ဘှဲ့သညျ သူ့ကို လာခဉျြးကပျ တဲ့ ကောငျလေးတှကေို လကျမခံခဲ့လို့ မာနကွီးသညျ မွောကျနသေညျ လို့ ကောငျ လေးတှေ ကွားထဲမှာ နံမညျကွီးခဲ့သညျ ။
မှူးအိမျ နံမညျ အပွညျ့အစုံက မှူးအိမျသူ ။ မှူးအိမျသူက ဘှဲ့လိုဘဲ အသား အရမျးဖွူတဲ့ ကောငျမလေး ။ နကျပွောငျတဲ့ဆံပငျတိုတိုလေးနဲ့ မှူးအိမျသညျ ဂပြနျမလေးတယောကျလို့ ထငျရသညျ ။ မှူးအိမျရဲ့ အဖကေလညျး ဘှဲ့ရဲ့ အဖလေိုဘဲ ကွီးမားတဲ့ ဂုဏျပုဒျရာထူးရှိသညျ ။ ဘှဲ့လိုဘဲ စာတျောတဲ့ ကောငျမလေး ဖွဈသညျ ။ မှူးအိမျကိုလညျး ကွိုကျကွ လိုကျကွ ဖနျကွကွံကွတဲ့ ဘဲတှကေ အရမျးမြားသညျ။ မှူးအိမျက တယောကျကိုမှ မကျြနှာသာ မပေးလို့ ဘှဲ့လိုဘဲ မာနသခငျမလေး လို့ နံမညျပေးကွပွနျသညျ ။ တိမျဂှမျး နံမညျ အပွညျ့အစုံက တိမျဂှမျးဆိုငျ ။ တိမျဂှမျးသညျ လညျး ဘှဲ့..မှူးအိမျတို့လိုဘဲ အသားဖွူဖွူ ကိုယျလုံး လှလှနဲ့ ခြောခြောလေး ပါ ။ ဘှဲ့နဲ့မှူးအိမျတို့ထကျ တိမျဂှမျးက တငျပိုကွီးသညျ လို့ သူငယျခငျြး မိနျးကလေးတှကေ ပွောကွသညျ ။ သို့သျော
သိပျအကွီးစားကွီးတော့ မဟုတျပါဘူး ။ တိမျဂှမျးနဲ့ သူတို့နှဈယောကျနဲ့က မတိမျးမယိမျးပါလို့ တိမျဂှမျး ထငျပါသညျ ။ ရှလေငျပနျးနဲ့ အခငျြးဆေး ရှဘေုံပျေါမှာ စံရတဲ့ ကောငျမလေး ။ ခမျြးသာလှနျးတဲ့ မိဘတှကွေောငျ့ တိမျဂှမျးဆိုငျသညျ ဘှဲ့တို့ မှူးအိမျတို့လိုဘဲ ခြောမောလှပတဲ့ ကောငျမလေးတယောကျ ဖွဈသညျ ။
တိမျဂှမျးဆိုငျကို ရယူပိုငျဆိုငျလိုတာကွောငျ့ ရူးသှပျရတဲ့ လူတှေ အမြားကွီး ရှိခဲ့သညျလို့ တက်ကသိုလျတခှငျမှာ နံမညျကြျောခဲ့သညျ ။ တိမျဂှမျးဆိုငျကတော့ မောငျညိုမှိုငျး ဆိုတဲ့ စာတျောတဲ့ ရိုးသား ကွိုးစားတဲ့ ဆငျးရဲသားကြောငျးသားလေး တယောကျကို ခငျမငျလိုကျသေးသညျ ။ သို့ပမေယျ့ ခဈြသူ ဘ၀ မရောကျလိုကျ ။ မောငျညိုမှိုငျးသညျ ဆငျးရဲတှငျး နကျတဲ့ ဒါဏျတှေ ပိပွီး ကြောငျး ဆကျမတကျနိုငျဘဲ တက်ကသိုလျနယျမွကေို ကြောခိုငျးသှားခဲ့လို့ တိမျဂှမျးဆိုငျလညျး စိတျဝဒေနာကို တျောတျောဘဲ ခံစားလိုကျရသညျ ။ ဘှဲ့ စစေ့ပျကွောငျးလမျးတော့ မညျလို့ ကွားလိုကျလို့ မှူးအိမျ ဘှဲ့ဆီကို ဖုနျးဆကျလိုကျသညျ ။ ဘှဲ့က သူမ စစေ့ပျပှဲမှာ မှူးအိမျကို ရှိစခေငျြသညျ ။ တိမျဂှမျးလညျး လာမညျလို့ ဘှဲ့က ပွောပွသညျ ။
ဘှဲ့နဲ့ မှူးအိမျ ..တိမျဂှမျးတို့က တက်ကသိုလျမှာ လေးနှဈတာ ကြောငျးတကျခဲ့ စာကကျြခဲ့ တှဲခဲ့ ကဲခဲ့သူတှပေါ ။ အမွဲ တတှဲတှဲ အတူတူစား အတူတူသှားတဲ့ သူတို့သုံးယောကျစလုံးက အခြောအမိုကျလေးတှမေို့ ကြောငျးတုံးက သူတို့သုံးယောကျကို လူသိမြားခဲ့သညျ ။ ကြောငျးသားတှရေဲ့ ပါးစပျဖြားမှာ ရပေနျးစားခဲ့တဲ့ သူတို့ သုံးယောကျသညျ ကြောငျးသူဘဝမှာ သုံးယောကျပေါငျးပွီး အပြျောလှနျခဲ့ကွလို့ သူတို့ကို ခဉျြးကပျတဲ့ ယောကျြားတှေ တပုံတခေါငျးကွီး ရှိခဲ့တာကို လဈြလြူရှုခဲ့ကွတာ ကြောငျးလညျး ပွီးရော သူတို့ သုံးယောကျစလုံး ရညျးစားမရှိကွသေး။ ကြောငျးပွီးသှားတာနဲ့ သူတို့သညျ ရှယျတူ ယောကျြားလေးတှနေဲ့ တှဆေုံ့ကွဖို့ လမျး မရှိသလောကျ ဖွဈကုနျပွီး သညျအတိုငျး ဆိုရငျ အပြိုကွီးမမတှေ ဘ၀ တှနေဲ့ အရိုးထုတျကွရတော့မညျ လို့ အခငျြးခငျြး ဖုနျးပွောကွရငျ တှဆေုံ့ကွရငျ ဟာသ အဖွဈ ပွောဖွဈကွသညျ ။ ကြောငျးသူဘဝမှာ အရိုးမြားတယျ ခြေးခါးတယျ လုပျပွီး ရှေးနခေဲ့ကွတဲ့ သူတို့ သုံးယောကျဟာ ကြောငျးလညျးပွီးရော တယောကျတနရောဆီ အလုပျခှငျ ဝငျကွတဲ့အခါ တယောကျနဲ့ တယောကျ မတှဖွေ့ဈကွတော့ဘဲ မြား သောအားဖွငျ့ ဖုနျးနဲ့ဘဲ ဆကျသှယျခဲ့ကွသညျ ။ ဒီအခါ “ သယျရငျး…ဘဲရပွီလား…” ဆိုတဲ့ မေးခှနျးကို တယောကျနဲ့ တယောကျ မေးဖွဈကွသညျ ။ အလုပျခှငျတှမှော သူတို့ တှကွေုံ့ရတဲ့ အတှအေ့ကွုံတှကေို ဖလှယျကွတော့ မှူးအိမျက သူ့အထကျက အရာရှိက မိနျးမနဲ့ ကလေးတှေ ရှိရကျနဲ့ သူမကို ကွိုကျနလေို့ အလုပျတောငျ ထှကျခငျြသညျလို့ စိတျပကျြလကျပကျြ ပွောပွသညျ ။ တိမျဂှမျးကတော့ သူ့လုပျဖျေါကိုငျဖကျ ဖွဈလာတဲ့ ဘဲက သဘောကောငျးပမေယျ့ လူက ဘိုကျရှဲရှဲ ၀၀ဖိုငျ့ဖိုငျ့ပုပု ဖွဈနလေို့ ခငျလညျးခငျ ဒီထကျတဆငျ့တကျဖို့ရာလညျး အားနာစှာနဲ့ ငွငျးပယျမိနသေညျလို့ပွောပွသညျ ။
ဘှဲ့ကတော့ အလုပျခှငျမှာလညျး မတှေ့ ဘယျမှာမှလညျး ခဈြသူအဖွဈ အိမျထောငျဖကျ အဖွဈ လကျတှဲနိုငျမယျ့ ဘဲ မတှလေို့ အေးအေးဘဲ တကိုယျတညျးနလေိုကျတော့မယျ လို့ ဆုံးဖွတျထားခြိနျ သမီးကို အိမျထောငျပွုစခေငျြတဲ့ မိဘတှကေ သူတို့ရဲ့ မိတျဆှတှေရေဲ့ သားတှထေဲ ဘှဲ့နဲ့ လကျဆကျပေးဖို့ တယောကျယောကျမြား ရှိလမေလား ဆိုပွီး ရှာပုံတျောဖှငျ့ကွတော့ ပညာလညျးတတျ ထကျမွကျထူးခြှနျသညျလို့ ထငျတဲ့ လူရှယျတယောကျကို သူတို့ တှကွေ့ပွီး ဘှဲ့ကို သဘောကလြား လို့ ပွကွသညျ ။ ဘှဲ့ကလညျး သညျလူနဲ့ လူခငျြး တှကွေ့ညျ့ခငျြသေးသညျလို့ ပွနျပွောလိုကျလို့ ဘှဲ့မိဘတှကေ သညျလူရဲ့ မိဘတှနေဲ့ တိုငျပငျပွီး တနမှေ့ာ သညျလူနဲ့ ဘှဲ့ကို တှကွေ့ဖို့ စီစဉျပေးကွသညျ ။ သူ့နံမညျက ဉာဏျထကျဖွိုးဝေ ။ သူက မိဘမြိုးရိုး ဘကျဂရောငျးရော ပညာ အရညျအခငျြး လုပျရညျကိုငျရညျရော ဘာမှ ပွောစရာ မရှိသလို ရုပျရညျသှငျပွငျကလညျး ဘှဲ့နဲ့ လိုကျဖကျတဲ့ လူတယောကျ ဖွဈနလေို့ ဘှဲ့ကလညျးသူနဲ့ တှကွေ့ဖို့ မိဘတှကေို ခေါငျးငွှိမျ့လကျခံခဲ့သညျ ။
ဉာဏျထကျဖွိုးဝနေဲ့သူ့မိဘတှကေ ဘှဲ့တို့ အိမျကို ညနစော စားဖို့ ရောကျလာကွပွီး မိဘတှကေ ဉာဏျထကျ ဖွိုးဝနေဲ့ ဘှဲ့ကို တှပေ့ေးကွသညျ ။ သမီးတို့ခငျြး စကားပွောကွညျ့ကွပေါ့ လို့ မမေကေ ပွောသညျ ။ ဘှဲ့ လညျး ဉာဏျထကျဖွိုးဝနေဲ့ ဘှဲ့တို့ ခွံအနောကျဖကျမှာ လမျးလြှောကျကွရငျး စကားစပွောဖွဈသညျ ။ ဉာဏျထကျဖွိုးဝသေညျ ရုပျသနျ့သလို စိတျသဘောလညျး ကောငျးမညျလို့ တှတှေ့ခေ့ငျြး အကဲခတျမိသညျ ။ ဘှဲ့လိုဘဲ ကြောငျးနတေုံးက ခဈြသူ မရှာခဲ့လို့ အခု သူလညျး မိဘက ရှာပေးတာကို လာကွညျ့တာ ။ ဘှဲ့နဲ့ စကားပွောလို့ အဆငျပွသေညျ ။ သူတို့ ပွနျသှားတော့ မမေတေို့က ဘယျလိုသဘောရသလဲ မေးတဲ့အခါ ဘှဲ့လညျး ဖွဈနိုငျခွေ ရှိသညျ အခြိနျနဲနဲတော့ ပေးပါဦးလို့ မမေကေို့ ပွောလိုကျသညျ ။ သညျအခြိနျက စပွီးတော့ ရှလေမျးငှလေမျး ပေါကျသှားပွီမို့ ဉာဏျထကျဖွိုးဝလေညျး ဘှဲ့တို့ အိမျကို အမွဲ ဝငျထှကျတော့တာဘဲ ။ ဘှဲ့ကလညျး သူ့ကို ခငျမိလာသလို သူ့အကွောငျးကိုလညျး ဒီထကျ ပိုသိခငျြလို့ သူနဲ့ အတူတူ ထမငျးစားထှကျ ဈေးဝယျထှကျခဲ့သလို သူ့အိမျကိုလညျး လိုကျလညျခဲ့သညျ ။ အခုထိ ဉာဏျထကျ အပျေါဘာမှ မကွိုကျတဲ့အခကျြ မတှမေိ့ပါဘူး ။ ဘှဲ့ကို စိတျလှုပျရှားစတေဲ့ လူတယောကျတော့ မဟုတျဘူး ။
အိမျထောငျဖကျ အဖွဈ ရှေးခယျြဖို့ ကောငျးတဲ့လူ လို့တော့ ဘှဲ့သိသညျ ။ လကျခံသညျ ။ မိဘနှဈဖကျစလုံးကလညျး ဒိတျဒိတျကွဲတှမေို့ အကောငျးဆုံး ဟိုတယျမှာ ထိပျဆုံးအဆငျ့နဲ့ မင်ျဂလာပှဲ ကငျြးပကွမညျ လို့ စဉျးစားပွငျဆငျနကွေသညျ ။ မမေနေဲ့ ဖဖေကေ ဘှဲ့ကို ဉာဏျထကျနဲ့ ပတျသကျပွီး ထပျမေးကွသညျ ။ သမီးဆန်ဒ ဘယျလိုလဲပေါ့ ။ ဘှဲ့က ဉာဏျထကျကို ငွငျးစရာ မရှိပါဘူး လို့ ဖွလေိုကျသညျ ။ မမေတေို့က ဉာဏျထကျရဲ့ မိဘတှနေဲ့ စကားပွော တိုငျပငျကွပွီး တရားဝငျ စစေ့ပျကွောငျးလမျးတဲ့ ပှဲ လုပျလိုကျကွမညျလို့ ဆုံးဖွတျလိုကျကွပါသညျ ။ ဘှဲ့ စစေ့ပျကွောငျးလမျးတော့မညျလို့ ဘှဲ့က အရငျဆုံး တှဲဖျေါတှဲဖကျ ခဈြသူငယျခငျြးတှကေို အကွောငျးကွားလိုကျသညျ ။ တိမျဂှမျးဆိုငျက မန်တလေးမှာ မိဘလကျငုတျ စီးပှားရေး လုပျငနျးတှကေို ဦးစီး လုပျကိုငျနသေလို မှူးအိမျက မွဈကွီးနားမှာ အလုပျ စဝငျနသေညျ ။ နှဈယောကျစလုံးက ဘှဲ့ရဲ့ စစေ့ပျပှဲကို တကျရောကျကွမညျလို့ဘှဲ့ကို အကွောငျးပွနျကွသညျ ။ စစေ့ပျကွောငျးလမျးပှဲမှာ ဘယျလို အဝတျအစား ဝတျကွမညျ ဆိုတာကို သူငယျခငျြး သုံးယောကျ တိုငျပငျရတာ အမော ။ စစေ့ပျပှဲ မတိုငျခငျ သုံးရကျလောကျထဲက ရနျကုနျကို လာကွဖို့ ဘှဲ့က ချေါသညျ ။ မှူးအိမျနဲ့ တိမျ ဂှမျးတို့က ဘှဲ့ ဖွူရငျ လိုကျဖွူ ဘှဲ့မဲရငျ လိုကျမဲသူ အသံတူတဲ့ တကယျ့အရငျးအခွာတှမေို့ ဘှဲ့ဘာပွောပွောလုပျသညျ ။ လကျခံသညျ ။
မှူးအိမျ မွဈကွီးနားက ရောကျလာတဲ့အခါ ဘှဲ့က လယောဉျကှငျးက စောငျ့ကွိုနသေညျ ။ တိမျဂှမျး မန်တလေးကရောကျလာတဲ့အခြိနျမှာ ဘှဲ့နဲ့ မှူးအိမျတို့နှဈယောကျက လယောဉျကှငျးက စောငျ့ကွိုသညျ ။ သူငယျခငျြးသုံးယောကျ အရမျးပြျောကွသညျ ။ ဘှဲ့အိမျမှာ ရှေးဟောငျးနှောငျး ဖွဈ ကြောငျးသူ ဘဝက ဟာတှကေို ပွနျပွောလို့ မဆုံးအောငျဘဲ ။ အတူ စားခဲ့တဲ့ အစားအစာတှေ ကို ပွနျစားကွ သညျ ။ ဘှဲ့က ဉာဏျထကျနဲ့ သူငယျခငျြးတှကေို မိတျဆကျပေးသညျ ။
ဉာဏျထကျသညျ သူတို့ ထငျတာထကျ ရုပျဖွောငျ့ သညျလို့ မှူးအိမျနဲ့ တိမျဂှမျးတို့က ဘှဲ့ကိုပွောကွသညျ ။ ဉာဏျထကျက ဘှဲ့ရဲ့ ခဈြသူငယျခငျြးတှမေို့ မှူးအိမျ နဲ့ တိမျဂှမျးတို့ကို အရမျး ဂရုစိုကျသညျ ။ သဘောကောငျးတဲ့ ဉာဏျထကျကို သူတို့နှဈယောကျ တအား ခငျမငျသှားကွသညျ ။ စစေ့ပျကွောငျးလမျးပှဲကို နှဈဖကျမိဘတှေ ဆှမြေိုးမိသားစုတှနေဲ့ ဘှဲ့နဲ့ ဉာဏျထကျတို့ရဲ့ အရငျးနှီးဆုံး ကြောငျးနဖေကျ သူငယျခငျြးတှေ တကျရောကျကွသညျ ။ သုံးလလောကျအတှငျး မင်ျဂလာပှဲ လုပျမညျ လို့ မိဘတှကေ ပွောဆိုကွသညျ ။ စစေ့ပျပှဲအပွီး သူငယျခငျြး သုံးယောကျ ကိုယျ့မွို့ကို မပွနျခငျ မင်ျဂလာပှဲမှာ ပွနျဆုံဖို့ ခြိနျးကွသညျ ။ တိမျဂှမျးက “ မင်ျဂလာပှဲ မတိုငျခငျလညျး ဒို့သုံးယောကျ ဆုံရအောငျကှာ…ဘှဲ့ က မကွာခငျ အိုရတော့မှာ.. အပြိုဘ၀ နဲ့ ရှိနတေုံး ဒို့ အပြိုသုံးယောကျ အတူတူ ပြျောကွခငျြသေးတယျ… ယူတို့နှဈယောကျ မနျးလေးကို လာခဲ့ကွပါလား….” လို့ ပွောလို့ မှူးအိမျကလညျး တိမျဂှမျး ပွောတာကို သဘောတူသညျ ။
“ ဟုတျတယျ..ဘှဲ့..ဒို့ မနျးလေးမှာ ဆုံကွရအောငျ.. ယူက ရနျကုနျက တကျလာ..ဒို့က မွဈကွီးနားက ဆငျးခဲ့မယျ.. မင်ျဂလာဆောငျတဲ့အခြိနျ မရောကျခငျ နောကျဆုံး အပွတျကဲမယျလေ…” လို့ မှူးအိမျက ပွောလိုကျသညျ ။ တိမျဂှမျးက “ ဟုတျတယျ..မင်ျဂလာဆောငျပွီးရငျ ယူက ကိုဉာဏျထကျကွီးနဲ့ ဆို ဒို့တတှနေဲ့ အရငျလို မလှတျလပျတော့ဘူးလေ…. ဒို့သုံးယောကျ ကြောငျးတုံးကလို ကလပျသှားပွီး အပွတျက လိုကျကွရအောငျ…” လို့ ပွောသညျ ။ ဘှဲ့ကလညျး.. “ ယူတို့ကလညျး ကဲဖို့ဘဲ စဉျးစားနကွေတယျ… ခုထိကဲခငျြတုံး….” လို့ ပွောလိုကျပမေယျ့ သူငယျခငျြးတှေ ရဲ့ အကွံအစညျကို အမွဲ လိုကျနာနကွေပါဘဲလေ ။ ဘှဲ့ မင်ျဂလာ မဆောငျခငျ သူငယျခငျြး သုံးယောကျ အပြိုဘ၀ နောကျဆုံး ပြျောခွငျး ခရီး ထှကျကွဖို့ ကိစ်စကို ဉာဏျထကျနဲ့ ညစာ ထှကျစားကွရငျး အမှတျမ ထငျ အရေးမကွီးသလို ပွောမိတော့ ဉာဏျထကျက မသှားစခေငျြတဲ့အမူအရာတှေ ပွလို့ ဘှဲ့လညျး အံ့သွသှားရသညျ ။ ဉာဏျထကျသညျ ဘှဲ့ ဘာလုပျလုပျ ထောကျခံသူ ဘှဲ့ ဘာပွောပွော သဘောကသြူလို့ ဘှဲ့က ထငျထားတာ ။ ထငျခဲ့တာ ။ ပထမဆုံး အကွိမျ ဉာဏျထကျက ဘှဲ့ပွောတာကို လကျမခံခငျြတာ ။ ဘှဲ့လညျး ဉာဏျထကျ ဒီလိုလေး ဖွဈလိုကျတာနဲ့ဘဲ ဉာဏျထကျနဲ့ တသကျလုံး ပေါငျးဖို့လကျထပျတဲ့ ကိစ်စကို နဲနဲ ပွနျစဉျးစားသှားသညျ ။ လကျထပျပွီး လငျမယား ဖွဈကွရငျကော ဘှဲ့လုပျတာတှကေို သူ တားမွဈနမှောလား ဆိုတဲ့ မေးခှနျး က ဘှဲ့ခေါငျးထဲကို ရောကျလာသညျ ။
ဘှဲ့က ငယျငယျလေးထဲက မိဘတှေ မကွိုကျတာကို လညျး မလုပျလို့ မိဘတှကေလညျး ဘှဲ့ကို အလိုလိုကျသညျ ။ လိုတာ အကုနျရတဲ့ ကလေး ဖွဈခဲ့သညျ ။ တက်ကသိုလျကြောငျးသူ ဖွဈလာတော့ ပွီးပါလရေော ။ ဖဖေနေဲ့ မမေကေ ဘှဲ့ ဖွဈခငျြတာတှေ ကို အကုနျ ဖွဈစဘေဲ ။ ဘှဲ့ကို ဖူးဖူးမှုတျထားသညျလို့ ပွောရမညျ ။ ဉာဏျထကျက “ ကိုယျက စိတျပူလို့ပါ..ဘှဲ့ကို အမွဲ စောငျ့ရှောကျခငျြတာ.. ကိုယျမပါတော့ စိတျပူတယျ…ဝကျဒငျပွီးမှဘဲ ကိုယျနဲ့ ခရီးတှေ ထှကျကွရငျ မကောငျးဘူးလား…” လို့ ပွောသညျ ။ ဘှဲ့လညျး သူငယျခငျြး ခငျမငျတဲ့စိတျက အရမျးမြားတော့ သူပွောတာကို မကွိုကျဘူး ။ “ ကိုဉာဏျနဲ့လညျး သှားမယျ..မှူးအိမျတို့ တိမျဂှမျးတို့နဲ့လညျး သှားမယျ…ဘှဲ့ ကိုဉာဏျနဲ့ လကျမထပျသေးခငျ ကိုဉာဏျ ဘာမှ ဘှဲ့ကို မခြုပျခယျြပါနဲ့…” လို့ နဲနဲ စိတျတိုတဲ့ အသံနဲ့ သူ့ကို ပွနျပွောလိုကျမိပွီး ဖါလူဒါသှားသောကျဖို့ ရှိတာကို ဖကျြလိုကျသညျ ။ “ မသောကျတော့ဘူး..အိမျဘဲ ပွနျမယျ…” လို့ ပွောလိုကျသညျ ။ ဉာဏျထကျလညျး ဘှဲ့ စိတျဆိုးသှားမှနျး သိလို့ ပွနျခြော့ဖို့ ကွိုးစားသညျ ။ ဉာဏျထကျသညျ စစေ့ပျပွီးကွပွီ ဖွဈလို့ အရငျကထကျ ရဲတငျးလာသညျ ။ မကွာခငျလညျး မင်ျဂလာဆောငျဖို့ လုပျတော့မှာမို့ ဘှဲ့ကို ဖကျခငျြ နမျးခငျြ ကိုငျတှယျပှတျသပျတာတှေ လုပျခငျြလာသညျ ။ ဘှဲ့လညျး အခု အရှယျ အထိ ယောကျြားတှရေဲ့ အထိအတှကေို့ တခါမှ ရဘူးတာ မဟုတျလို့ သူ့အထိအတှေ့ အကိုငျအတှယျတှကေို သာယာမိတာ အမှနျပါဘဲ ။ သူနဲ့ ခဈြသူတှေ မဖွဈကွဘဲနဲ့ အခုလို ကိုငျတှယျပှတျသပျ တာ ခံရတာတော့ တမြိုးဘဲ ။ ဉာဏျထကျက ဘှဲ့ကို တခါမှ ခဈြပါတယျလို့ မပွောခဲ့ဖူးဘူးလေ။ ဉာဏျထကျက ဉာဏျမြားလာသညျ ။ လူကွားထဲကို သိပျ မသှားခငျြတော့ဘဲ သူ့အိမျကို အချေါမြားလာသညျ ။
သူ့အိမျမှာ ညနပေိုငျးဆိုရငျ သူ့မိဘတှလေညျး မရှိကွဘူး ။ ခိုငျးတဲ့ အိမျဖျေါတှဘောတှလေညျး သူက ရှောငျခိုငျးထားသလား မသိဘူး။ မတှဘေူ့း ။ ဘှဲ့ကို သူ့အိမျကို ချေါသှားရငျ စန်တယားတီးခငျြတဲ့ ဘှဲ့ကို စန်တယားရှိတဲ့ အခနျးကို ချေါသှားသညျ ။ ဘှဲ့ စန်တယားတီးတာကို သူ နားထောငျသညျ ။ အရမျးတျောတာဘဲ ဘှဲ့ထူးရယျ ဆိုပွီး ပွောရငျး နမျးတတျသညျ ။ ဘှဲ့လညျး သူနဲ့ နှဈယောကျထဲ နရေတာ စိတျလှုပျရှားမိရသညျ ။ သူက နမျးလိုကျ ဖကျလိုကျနဲ့ ဘှဲ့ပေါငျတှေ ခါး တှကေိုလညျး ကိုငျတတျ ပှတျတတျသညျလေ ။ ဒီနလေ့ညျး ထုံးစံအတိုငျး ညနပေိုငျး သူ ဘှဲ့ကို အိမျမှာ လာချေါသညျ ။ ဘှဲ့တို့ ဒီနေ့ ကိုးမိုငျဖကျမှာ ကျောဖီဆိုငျ လှလှလေး တဆိုငျ ဖှငျ့လို့ အစမျး အနနေဲ့ သှားကွညျ့မလို့ တိုငျပငျထားကွတာ ။ ဉာဏျထကျ နဲ့ ဆိုငျလှလှလေးမှာ ကျောဖီ အကောငျးစားနဲ့ မုနျ့အဆနျးတှေ ထိုငျ စားသောကျ ကွပွီးတော့ သူက “ ဘှဲ့ထူး…ဒီနလေ့ေ ကိုယျ ဘှဲ့ထူးရဲ့ ပီယာနို လကျရာတှကေို နားထောငျခငျြတယျ” လို့ ပွောလို့ ဘှဲ့လညျး
“ ဘယျကနေ ဘယျလို စိတျကူးပေါကျလဲ ကိုဉာဏျ..” လို့ သူ့ကို မေးမိသညျ ။ သူက “ ဖစျေ့ဘှတျချ မှာ ဘှဲ့ထူး တငျထားတဲ့ ပီယာနိုတီးတာတှေ ကိုယျ ပွနျကွညျ့ပွီး အပွငျမှာ ကိုယျတိုငျ နားထောငျခငျြလို့ပါ…” လို့ ပွောသညျ ။ အငျး..ဉာဏျထကျတော့ ဉာဏျမြားပွီ ။ သူ့အိမျချေါသှားပွီး အဖကျအပှတှေ့ေ လုပျခငျြ လို့ ဇာတျလမျးထှငျနတောလို့ ဘှဲ့လညျး သဘောပေါကျလိုကျသညျ ။ ဘာဘဲဖွဈဖွဈ သူက ကိုယျ့ခငျပှနျးလောငျး မကွာခငျ လကျထပျတော့မယျ့ သူဘဲလေ ။
ဘှဲ့က တှနျ့တိုနစေရာမရှိပါဘူး ။ လကျထပျမယျ့ညကမြှ အပြိုဘဝကို စှနျ့လှတျမယျ လို့လညျး ရှေးက မွနျမာမိနျးမတှေ လိုလညျး ဘှဲ့က သဘောမထားလိုပါဘူး ။ သူ့ကိုငျတဲ့အခါ နမျးတဲ့အခါ ဘှဲ့လညျး စိတျတှေ လှုပျရှားမိရတာ အမှနျပါ ။ သှေးနဲ့ကိုယျ သားနဲ့ ကိုယျဘဲလေ ။ မိနျးမတှမှောက ဒီစိတျတှေ ယောကျြား တှလေောကျ မပွငျးထနျရငျသာ ရှိရမယျ ။ မိနျးမတှလေညျး လူဘဲ လေ။ ကာမစိတျ ရှိကွပွီး လိုလားကွတာပါဘဲလေ ။ ဘှဲ့ သူနဲ့ သူ့အိမျကို လိုကျလာလို့ ဉာဏျထကျ တအား ပြျောသှားသညျ ။ သူ့အမူအရာက သိသာသညျ ။ ဘှဲ့မှာလညျး အပြိုကွီးမမ သူငယျခငျြး နှဈယောကျက ညတိုငျး ဖုနျးပွောကွရငျ “ ဉာဏျထကျနဲ့ ဘာဖွဈကွလဲ…” ဆိုတဲ့ မေးခှနျးကို အမွဲမေးတတျလို့ တခါတလေ ပွောစရာ မရှိရငျ ကွံဖနျပွီး လုပျဇာတျပွောလိုကျမိသညျ ။ သူတို့ ကွားခငျြ နတောကို ပွောပေးတာပါ ။ ဘှဲ့လညျး အှနျလိုငျးက မွနျမာဆိုကျတှကေို ဝငျလိုကျပွီး အဲဒီက စာရေးဆရာတှေ ရေးထးတဲ့ အပွာဇာတျလမျးလေးတှကေို ဖတျ ပွီး ကိုယျ့ဇာတျလမျးလိုလိုနဲ့ ပွောပွလိုကျတာ ။ မှူးအိမျဆိုရငျ တကယျ့ဘရုတျ ။ “ဘှဲ့ရယျ.. နငျ့ဇာတျလမျးကွောငျ့ ငါလညျး မနနေိုငျတော့ဘူး…. လကျတှေ လညျး ဟိုရောကျဒီရောကျနဲ့…” လို့ ပွောလို့ ရယျနကွေရသညျ ။ ဒီနညေ့နေ ဉာဏျထကျရဲ့ အိမျကို ရောကျသှားတော့ ခွံတံခါး ဖှငျ့ပေးမယျ့လူတောငျ မရှိဘူး ။ ဉာဏျထူး ကိုယျတိုငျ ကားပျေါက ဆငျးဖှငျ့ရသညျ ။ တိုကျကွီးတခုလုံးလညျး တိတျဆိတျ ငွိမျသကျနသေညျ ။
“ ကိုဉာဏျ့အဖအေမကေော…မရှိကွဘူးလား…” “ မရှိကွဘူး..ဘှဲ့ထူး….” တကယျ အမှနျက သူ့မိဘတှကေ စငျကာပူကို ခရီးထှကျနကွေတာ ။ သူက ဘှဲ့ကို မပွောပွဘူး ။ “ အိမျသားတှရေော…ဘယျရောကျနကွေတာလဲ ..” “ မသိဘူး ဘှဲ့ထူး..ကိုယျမသိဘူး…ရှိမှာပေါ့….” ဘှဲ့ကို စန်တယား ရှိတဲ့ အတှငျး ဧညျ့ခနျး ဆီ ကို သူ ချေါသှားသညျ ။ သူတို့ အတှငျး ဧညျ့ခနျးမှာက စန်တယား..အျောဂငျနဲ့ ကာရာအိုကီ စကျတှေ ရှိသညျ ။ မိသားစု အပနျးဖွတေဲ့အခနျးပေါ့ ။ ဘှဲ့ စန်ဒယား တီးသညျ ။ တိတျဆိတျနတေဲ့ ဉာဏျထကျတို့ အတှငျးဧညျ့ခနျးမှာ ဘှဲ့လကျသံက ငွိမျ့ငွိမျ့ညောငျးညောငျးလေး ထှကျပျေါနသေညျ ။ ဉာဏျထကျက ဘှဲ့တီးနေ တာကို ဗီဒီယို ရိုကျသညျ ။ ဖဖေနေဲ့ မမေတေို့က ဘှဲ့ကို ငယျငယျလေးထဲက စန်ဒယား သငျပေးခဲ့သညျ ။ အိမျမှာ ဆရာမ ချေါပွီးသငျတာ ။ ဖဖေနေဲ့ မမေတေို့ ရဲ့ မိတျဆှတှေထေဲမှာ စန်ဒယားမိုးမငျးဆှေ ဆိုတာ ရှိပမေယျ့ ဖဖေကေဘှဲ့ကို ယောကျြားဆရာနဲ့ မသငျခိုငျးစခေငျြလို့ မစ်စဈဘဲနကျ ဆိုတဲ့ အင်ျဂလိပျမကွီးကို ချေါပွီး သငျခိုငျးခဲ့သညျ ။ ဘှဲ့ရဲ့ လကျခြောငျးလေးတှကေ စန်ဒယား ခလုပျလေးတှကေို နှိပျနတေဲ့ အခြိနျမှာ ဉာဏျထကျရဲ့ လကျတှကေ ဘှဲ့ရဲ့ ကိုယျပျေါမှာ နရောအနှံ့ ပွေးလှား ဆော့ကစားလာသညျ ။ “ ဟိတျကိုဉာဏျ…ဘှဲ့တီးလို့ မရတော့ဘူး.. ကဲတယျကှာ..လုပျနဲ့…” လို့ ဟနျ့လညျး မရဘူး ။ ဉာဏျထကျ သညျ ခုတလော ကဲလာရဲလာသညျ ။ ဉာဏျထကျရဲ့ လကျတဖကျက ဘှဲ့ရဲ့ တငျပါးအိအိတှကေို ပှတျနယျနသေညျ ။ ပေါငျတနျတှဆေီ ကိုလညျး ရောကျသှားသညျ ။
“ ဘှဲ့..ခဈြတယျ…ကှာ….ကိုယျ ဘှဲ့ကို အရမျးခဈြတယျ….” ဉာဏျထကျ ပထမဆုံး ပွောတဲ့ ခဈြစကား ။ ရမကျပွငျးပွငျးနဲ့ ကိုငျတှယျနရေငျး ပွောတဲ့စကား ။ ခဈြတယျလို့ ပွောပမေယျ့ ဘှဲ့က သူ့ကို ခဈြသလားလို့လညျး သူ မမေးဘူး ။ သူဦးတညျနတော ဘယျကိုလညျး ဆိုတာကို ဘှဲ့သိသညျ ။ သူ့လကျတှကေ ဘှဲ့ အဝတျတှကေို ခြှတျဖို့ ကွိုးစားနသေညျ ။ ဘှဲ့လညျး သူ့အထိ အတှတှေ့ကွေောငျ့ စိတျတှေ လှုပျရှားလာသညျ ။ ကိုယျပျေါက ကှာကသြှားတဲ့ ဖယျသှားတဲ့ အဝတျအစားတှကေို ဘှဲ့မဆှဲတားလိုကျမိဘူး ။ အသားဖွူတဲ့ ဉာဏျထကျရဲ့ မကျြနှာနဲ့ နားရှကျဖြားတှေ ရဲတှတျနကွေတာကို တှရေ့သညျ ။ ဘှဲ့ရဲ့ ကိုယျ ပျေါပိုငျး အဝတျမဲ့နပွေီ ။ တုနျခငျြ ခုနျခငျြနတေဲ့ ဘှဲ့ရဲ့ ရငျသားစိုငျလှလှတှကေို သူ အငမျးမရ စို့စုတျသညျ ။ “ အို..ကိုဉာဏျ..အငျဟငျ…အိုး….ဟငျ့ဟငျ့… ကဲတယျကှာ…..” ကွှထနတေဲ့ စိတျတှကွေောငျ့ မာတငျး ထောငျထနကွေတဲ့ ဘှဲ့ရဲ့ ရငျသီးဖုလေးတှကေို ဘယျဖကျပွီး ညာဖကျ တလှညျ့စီ သူစို့နသေညျ ။ သူ့လြာက နို့သီးလေးတှကေို ပတျခွာလှညျ့ ယကျနသေညျ ။ ဘှဲ့ရဲ့ စိတျတှေ လှတျထှကျသှားသညျ ။ သူကလညျး ကိုယျအောကျပိုငျးက စကပျကို ခြှတျဖို့ ကွိုးစားသညျ ။ ဘှဲ့လညျး ခဲယဉျးနတေဲ့ သူ့ကိုကူညီပွီး ခြှတျပေးလိုကျသညျ ။ ရှကျလညျး မရှကျနိုငျတော့ဘူး ။
ယောကျြားတယောကျနဲ့ ဒီလို ဆကျဆံဖွဈတာ ပထမဆုံးဘဲ ။ မကွုံစဖူး ကွုံရတာတှကေ ဘှဲ့ရဲ့စိတျတှကေို အမွငျ့ဆုံးကို တကျသှားစသေညျ ။ စကပျကြှတျသှားတော့ သူ့လကျတှကေ ဘှဲ့ရဲ့ ပေါငျတနျဖွူဖွူတှပေျေါမှာ ပွေးလှားနသေလို ဘှဲ့ရဲ့ တငျပါးအိအိတှကေို အပီအပွငျကို ဆုပျနယျနသေညျ ။ ပငျတီလေးရဲ့ ဂှဆုံနရောကို သူ့လကျဖဝါး ရောကျလာသညျ ။ ဘှဲ့ရဲ့ အမွတျတနိုး သိမျးဆညျးထားတဲ့ ရတနာရှကွေုတျလေးကို သူ့လကျခြောငျးတှကေ ကိုငျမိနပွေီ ။ အရညျတှကေ စိုစိုရှဲနသေညျ ။ ရတနာရှကွေုတျဟာ ယားယံလှနျးနသေညျ ။ သူကိုငျတာကို ဘှဲ့ ကနြေပျနသေညျ ။ လကျခြောငျးတှကေ ရှကွေုတျရဲ့ နှုတျခမျးသား နုနုလေးတှကေို ဖှဖှလေး ပှတျသပျနသေညျ ။ ပငျတီလေးကို သူ ခြှတျဖို့ လုပျပွနျသညျ ။ ဘှဲ့သူ့ကို မတားမိ ။သူ ခြှတျတာကို ခံလိုကျသညျ ။ ဘှဲ့ တကိုယျလုံး ဘာ အဝတျမှ မကနျြတော့ ။ ဘှဲ့ကိုယျလုံးတီး ဖွဈသှားပွီ ။ သူက ဘှဲ့ကိုယျလုံးတှကေို တဝွကီး လိုကျကွညျ့နလေို့ ဘှဲ့ ဟနျ့တားလိုကျမိသညျ ။
“အို..မကွညျ့နဲ့…မကွညျ့နဲ့….” လို့ အျောလိုကျမိသညျ ။ သူက “ တအား လှလို့ပါ ဘှဲ့ရယျ…” လို့ ပွောသညျ ။ ဘှဲ့ ပေါငျတနျတှေ ကွားထဲကို သူ ငုံ့နမျးသညျ ။ သူ့နှာခေါငျးက ဘှဲ့ရဲ့ ရတနာရှကွေုတျ အကှဲကွောငျး တလြောကျ နမျးရှူနသေညျ ။ “ အို့….ဘာလို့ နမျးနတောလဲ..ကိုဉာဏျ….. အဲလို လုပျရလို့လား..ဘုနျးနိမျ့နလေိမျ့မယျ…” သူက ဘှဲ့ပွောတာတှကေို ဂရုမစိုကျတော့တဲ့ အပွငျ သူ့လြာကွီးနဲ့ ဘှဲ့အကှဲကွောငျးကို ကျောတငျယကျနသေညျ ။ ဘှဲ့ တကိုယျလုံး တုနျခါနရေအောငျ သူ့လြာအယကျက ကောငျးသညျ ။ တအားကောငျးသညျ ။ ဘှဲ့ အမွဲ စိတျဝငျစားခဲ့တဲ့ ဘာဂြာမှုတျတယျ ဆိုတာကွီးကို လကျတှကေ့ကြ ကွုံနရေပွီကှယျ ။ ရညျးစား ရှိတဲ့ အရငျးနှီးဆုံး သူငယျခငျြးတှေ ပွောပွတဲ့ ဘာဂြာ အတှအေ့ကွုံတှနေဲ့ အငျတာနကျကအပွာဆိုကျတှမှော ကွညျ့ဖူးခဲ့တဲ့ ဘာဂြာမှုတျတာတှကေိုဘဲ စိတျကူးယဉျပွီး လကျနဲ့ ကိုယျ့ဖါသာ ပှတျသပျပွီး အပြိုပေါကျ ဘ၀ ကတညျးက ဖွဖြေောကျခဲ့သညျ ။ အခုတော့ လကျတှေ့ ခံစားနရေပွီ ။
ဉာဏျထကျက မကွာခငျ လကျထပျတော့မယျ့ ခငျပှနျးလောငျးမို့ အစစ လိုကျလြောပေးလိုကျမိသညျ ။ စိတျတှေ တအား ထကွှသှားလို့လညျးပေါ့ ။ ဉာဏျထကျက ရှကွေုတျကို အမြိုးမြိုး ကလိပေးနသေညျ ။ ရှကွေုတျရဲ့ ရသာဖူးစိလေးကို သူ့လြာထိပျနဲ့ ရရေလေညျလညျ ထိုးဆှ ကျောပှတျ ကလိလိုကျတာ ဘှဲ့လညျး တအားကိုကောငျးသှားရပွီး အရညျတှေ တရှမျးရှမျး စိမျ့ထှကျပွီး တုနျတကျသှားရသညျ ။
ဒီအခြိနျမှာ တိုကျရှဖေ့ကျက ကားစကျရပျလိုကျသံကို ဘှဲ့တို့ နှဈယောကျလုံး ကွားလိုကျကွရသညျ ။ ဟငျ…. ဘယျသူလဲ…။ ဉာဏျထကျရော ဘှဲ့ရော ကိုယျတုံးလုံးကွီးတှနေဲ့…။ တိုကျအဝငျဝ တံခါးကွီးက ဘဲလျကို တတငျတငျနဲ့ နှိပျနတေဲ့အသံ ထှကျလာသညျ ။ “ ဟာ….ဘယျသူလဲ…..” ဉာဏျထကျသညျ လူတယောကျမှ တိုကျနဲ့ ခွံထဲ မရှိအောငျ စီစဉျထားခဲ့တာ ဖွဈသညျ ။ ဘဲလျ ဆကျတိုကျ နှိပျနလေို့ ဉာဏျထကျ မတျတပျ ထရပျပွီး ဘောငျးဘီကောကျစှပျ တီရှပျ ကောကျဝတျလိုကျပွီး..“ ဘှဲ့..ကိုယျ ခဏဆငျးကွညျ့လိုကျအုံးမယျ..” လို့ ပွောသညျ ။ ဘှဲ့လညျး မတျတပျ ထရပျလိုကျပွီး စကပျနဲ့ အကငြ်္ီတှကေို ကောကျယူ ပွနျဝတျလိုကျသညျ ။ ဉာဏျထကျ တိုကျအောကျကို ရောကျသှားတော့ တံခါးကို ဘဲလျ နှိပျနတောက မန်တလေးမှာ နတေဲ့ သူ့အဖရေဲ့ညီမ ဒျေါလေးသငျဇာတို့ မိသားစု ဖွဈနတောကို တှလေို့ကျရသညျ ။ “ ဟာ…ဒျေါလေးတို့ပါလား….” “ ဟုတျတယျ..သား….. ဘယျသူမှ မရှိကွဘူးလား ..ခွံစောငျ့ကွီး ဦးသာလညျး ဘယျရောကျနလေဲ…..” ဉာဏျထကျက တံခါး ဖှငျ့ပေးလိုကျသညျ ။ ဒျေါလေးတို့ မိသားစုတှေ တိုကျထဲ ဝငျလာကွတဲ့ အခြိနျ ဘှဲ့လညျးရခြေိုးခနျး ထဲ ဝငျပွီး အလှပွနျပွငျနသေညျ ။ ဉာဏျထကျလညျး လမျးခရီး အလညျမှာ တနျးလနျးကွီး ရပျသှားလို့ အခံရ ခကျနသေညျ ။ ဘှဲ့လညျး သူ့ကို အခုမှ ရှကျနေ မိသညျ ။ သူ့ကို အိမျပွနျပို့ခိုငျးလိုကျသညျ ။ ဉာဏျထကျလညျး ဘှဲ့ကို ဘာဂြာမှုတျလိုကျရတာ ကိုတော့တအား ကနြေပျနသေညျ ။ တောကျ.. လှလိုကျတဲ့ စောကျဖုတျ…လို့ ဉာဏျထကျရဲ့ စိတျထဲမှာ အခါခါ ရရှေတျနသေညျ ။
ဘှဲ့ အိမျပွနျရောကျတော့ ကိုယျအောကျပိုငျးတှေ ပေ၇နတေယျလို့ စိတျထဲမှာ မသနျ့သလို ဖွဈနတောနဲ့ ရခြေိုးလိုကျသညျ ။ ပေါငျကွားနရောတှေ ကို ဆပျပွာ နဲ့ အနှံ့ပှတျရငျး ရှကွေုတျက ရသာဖူးလေးကို စမျးမိထိမိပှတျမိတော့ စောစောက ကိုဉာဏျ ယကျပေးကလိပေးတာတှကေို ပွနျသတိရလာသညျ ။ စိတျတှေ ပွနျထလာသညျ ။ပွနျကွှလာသညျ ။ ရခြေိုးခနျး ကွမျးပွငျမှာ ထိုငျခရြငျး ရှကွေုတျကို ဖိဖိပှတျမိသညျ ။ ကိုဉာဏျရဲ့ အတနျခြောငျးကွီးကို ရခါနီးလေး သူ့အဒျေါရောကျလာလို့ ထပွေးကွရတာ ။ အငျး.. နဲတဲ့ အတနျကွီး မဟုတျဘူး ။ ဗီဒီယိုတှထေဲမှာဘဲ ယောကျြားလိငျတနျကို တှဖေူ့းခဲ့တာ ဆိုတော့ ဘှဲ့အတှကျ အရမျးကို စိတျလှုပျရှားစရာ အတှအေ့ကွုံပါ ။ ညဖကျရောကျတော့ မိသားစုအားလုံး ညစာ အတူတူစားကွသညျ ။ ဖဖေနေဲ့ မမေကေို မှူးအိမျ.. တိမျဂှမျးတို့နဲ့မန်တလေးမှာ ဆုံပွီး ပြျောကွမညျ ဆိုတာကို ပွောပွလိုကျသညျ ။ မမေနေဲ့ ဖဖေကေ ဘှဲ့လုပျခငျြတာတှကေို အကုနျခှငျ့ပွုနကေပြါဘဲလေ ။ ဖဖေမေမေတေို့နဲ့ တီဗီ ခဏ ထိုငျကွညျ့ပွီး ကိုယျ့အခနျးကို ကိုယျ တကျခဲ့တော့ မှူးအိမျနဲ့ တိမျဂှမျးတို့ကို ဒီနေ့ တှကွေုံ့ခဲ့တဲ့ အတှအေ့ကွုံတှကေို ပွောပွခငျြတာနဲ့ သူတို့ကို ဖုနျးချေါပွောပွလိုကျသညျ ။
မှူးအိမျတို့ စိတျဝငျစားကွပွီး အသေးစိတျကို မေးကွတော့တာဘဲ ။ ကိုဉာဏျရဲ့ အတနျကွီး မာမတျပွီးထောငျနတေဲ့အကွောငျး ပွောပွတော့ သူတို့ တအား သဘောကကြွသညျ ။ သူတို့လညျး ရညျးစားထားမှဖွဈမယျလို့ ပွောကွသညျ ။ ဘှဲ့ ဘာဂြာအမှုတျခံရတာကို ပွောပွတော့ သူတို့လညျး ကွုံခငျြလှပွီ လို့ ပွနျပွောကွပွီးကိုဉာဏျနဲ့ ထပျလုပျကွဖို့ တိုကျတှနျးကွသညျ ။ မှူးအိမျသူသညျ ခုတလော စိတျတှေ တအားထနသေညျ ။ အလုပျက ပွနျရောကျတဲ့အခြိနျ အှနျလိုငျးကနေ ဗီဒီယိုကားတှေ ကွညျ့တဲ့အခါ လိငျစပျယှကျတဲ့ အခနျးတှကေို ကွညျ့မိရငျ သဘာဝ ကာမစိတျတှေ တအား ထကွှပွီး ဆနျ့ကငျြဖကျလိငျကို လိုလားတဲ့ စိတျတှေ ဖွဈပျေါပွီးကိုယျ့ဖါသာ လကျနဲ့ ပှတျသပျမိရတာ အခါခါဘဲ ။ ညက မှူးအိမျ ကိုယျ့ဖါသာ အာသာဖွမေိရပွနျသညျ ။ ဘှဲ့ထူးကွောငျ့…။ ဘှဲ့ထူးက သူနဲ့ စစေ့ပျထားတဲ့ ကိုဉာဏျထကျနဲ့ ခြိနျးတှတေဲ့အကွောငျးတှကေို ဖုနျးဆကျ ပွောပွခဲ့သညျ ။ကိုဉာဏျထကျက ဘာဂြာကိုငျတဲ့အကွောငျး သူ့လီးကို ကိုငျခိုငျးတဲ့ အကွောငျးတှကေို အသေးစိတျ ပွောပွသညျ ။ မှူးအိမျကလညျး တအားဆာလောငျလိုလားနတေဲ့သူ ဆိုတော့ တကယျကွုံတဲ့ ဘှဲ့ထူးကို သိခငျြတာတှေ မေးမိသညျ ။ ဒါတှကေို စဉျးစားမွငျယောငျတော့ တအား ယားလာပွနျရော ။ ကိုယျ့အဖုတျကို ကိုယျ ပှတျပွီး အာသာဖွမေိရပွနျရော ။
အာသာဖွတေော့ ဦးဇျောဝငျးသောငျး ရုပျကို မွငျယောငျမိနသေညျ ။ အို..ဘာဖွဈတာလဲ မသိဘူး ။ ကိုယျ့ကိုယျကို အပွဈတငျမိသညျ ။ ဦးဇျောဝငျးသောငျးက မှူးအိမျရဲ့ အထကျက အရာရှိ ။ သူက မိနျးမလညျး ရှိသညျ ။ ကလေးလညျး ရှိသညျ ။ သူက မှူးအိမျကို သံယောဇဉျ ညိခငျြနတေဲ့သဘော ပွနတော ကွာပွီ ။ မှူးအိမျကို သူအရမျးကွိုကျနသေညျ ။ သူ့မိနျးမ ရှိရကျနဲ့ ဘာလို့ ဒီလို ဖွဈနတောလဲ ဆိုတာကို မကွာခငျဘဲ မှူးအိမျ သိရသညျ ။ သူ့မိနျးမနဲ့သူ တကကျြကကျြ အမွဲ ရနျဖွဈပွီး အဆငျမပွကွေဘူးတဲ့ ။ မှူးအိမျကို သူ့အကွောငျး သိတဲ့ ရုံးကရုံးအုပျမကွီး ဒျေါဝဝေက ပွောပွတာ ။
မှူးအိမျလညျး သူစိုကျစိုကျကွညျ့ရငျ အရမျး ရငျခုံတာဘဲ ။ သူ့မကျြလုံးတှကေ မှူးအိမျရဲ့ ဝတျထားတဲ့ အဝတျတှကေို ဖေါကျထှငျး မွငျသလိုကွီး ခံစားရသညျ ။ သူ့အကွညျ့တှကေ သိပျရဲလှနျးသညျ ။ မှူးအိမျကို ခဈြမိတာထကျလိငျဆကျဆံခငျြတဲ့ ပုံရှိသညျ ။ သူက ပိနျပိနျပါးပါး ဘိုကျခပျြခပျြနဲ့ ကွညျ့ကောငျးတဲ့လူမို့ ကို ယျ့ဖါသာ ပှတျတဲ့အခြိနျ သူ့ပုံကို မကျြစိထဲ မွငျယောငျသှားတာလားတော့ မသိဘူး ။ သူလညျး ကိုဉာဏျထကျလိုဘဲ လီးတုတျတုတျ ရှညျရှညျကွီးနဲ့လား မသိ ဘူး ။ တခါတလေ သူက မှူးအိမျကို သူနဲ့ ကားမောငျး ထှကျကွဖို့ ချေါသညျ ။ မှူးအိမျမလိုကျပါဘူး ။ သူ့မိနျးမ သိသှားရငျလညျး မကောငျးဘူးလေ ။ ရုံးမှာ သူက မှူးအိမျကို အစားအသောကျတှေ အမွဲကြှေး သညျ ။ သူ ထမငျးစားတဲ့ အခြိနျ မှူးအိမျကို လာချေါသညျ ။ မကောငျးတတျလို့ သူနဲ့ အတူတူ ထိုငျ စားရငျ သူက မှူးအိမျ ပုဂံထဲကို ဟငျးတှေ အမြားကွီး ထညျ့ပေးတတျသညျ ။ ရုံးက လူတှလေညျး သူ မှူးအိမျကို ကွိုကျနမှေနျး သိနကွေပွီ ။ ဒျေါဝဝေ ဆိုရငျ သူ့ကို မှူးအိမျရဲ့ ဘဲကွီး လို့ သုံးနှုံးနပွေီ ။ မှူးအိမျလညျး သူနဲ့ မှူးအိမျက ဘာမှ မဟုတျပါဘူး လို့ဘဲ သူတို့ကို ပွောခဲ့မိသညျ ။ တကယျလညျး အခုအခြိနျအထိ ဘာမှ မှ မဟုတျတာဘဲလေ ။ အိမျထောငျရှိတဲ့ သူနဲ့ ဘာဇာတျလမျးမှ မဖွဈခငျြပါဘူး ။
သူက နယျကို ခရီးထှကျပွီး ပွနျလာရငျ မှူးအိမျကို လကျဆောငျတှေ ပေးသညျ ။ မှူးအိမျလညျး ငွငျးရခကျလို့ သူပေးတာတှကေို ယူထားခဲ့မိသညျ ။ ဘှဲ့ထူးရဲ့ တှကွေုံ့တာတှကေို နားထောငျခဲ့ရပွီး ယောကျြားလိုခငျြတဲ့ ဝဒေနာကို ပွငျးပွငျးထနျထနျ ခံစားနရေလို့ အိပျရာထဲ ကိုယျ့စောကျဖုတျကို ကိုယျ့ဖါသာ လကျနဲ့ ပှတျမိနရေသညျ ။ အငျးဟငျ… ယားလိုကျတာကှယျ….လီးတုတျတုတျကွီးနဲ့ တအားလိုးပေးတာကို ခံခငျြလိုကျတာ…..လို့ တိုးတိုးလေး ညညျးနမေိသညျ ။ ယားလှနျးတဲ့ ဝဒေနာကွောငျ့ ညက တျောတျောနဲ့ အိပျလို့မပြျောဘူး ။ မနကျကတြော့ စိတျထဲမှာ တခုခု လိုနသေလို ခံစားရသညျ ။ ရုံးသှားဖို့ အဆငျသငျ့ ဖွဈတဲ့အခြိနျ ခါတိုငျး အတူတူ ရုံးသှားနကြေ မခငျမွလှငျက သူ နမေကောငျးလို့ ရုံးမတကျဘူးလို့ ဖုနျးဆကျသညျ ။ ဒါကွောငျ့ မှူးအိမျ တယောကျထဲဘဲ ရုံးသှားဖို့ လုပျသညျ ။ အိမျနဲ့ရုံးက သိပျ မဝေးတော့ စကျဘီးနဲ့ ဘဲ ရုံးသှားသညျ ။ အိမျထဲက အထှကျ အိမျရှကေို့ ကားတစီး ထိုးဆိကျလာတာ တှလေို့ကျရသညျ ။ ဟငျ….။ မှူးအိမျတို့ ရုံးက ကား ။ ဦးဇျောဝငျးသောငျးကွီး…။
“ မှူးအိမျ..လာလေ….ကိုယျလညျး ရုံးသှားးမလို့ဘဲ …. ” “ နပေါစေ….မှူးအိမျ စကျဘီးနဲ့ဘဲ သှားလိုကျပါမယျ….” “ ဟာ..မဟုတျတာကွီး….လာပါ…ကိုယျနဲ့ဘဲ လိုကျခဲ့ပါ….” မှူးအိမျလညျး မကောငျးတတျလို့ မငွငျးတော့ဘဲ သူ့ကားနဲ့ လိုကျသှားလိုကျသညျ ။ သူက ရုံးမရောကျခငျ “ စောသေးတယျ..တခုခု သောကျရအောငျ…” လို့ ပွောပွီး လဖကျရညျဆိုငျလေးတခုရှမှေ့ာ ထိုးရပျလိုကျသညျ ။ “ မှူးအိမျ မသောကျတော့ပါဘူး…ဆရာ…” လို့ ပွောလညျး မရဘူး ။ အတငျးကို ဆငျးခိုငျးနတောဘဲ ။လဖကျရညျဆိုငျထဲက လူတှကေလညျး ဝိုငျးကွညျ့နကွေသညျ လို့ မှူးအိမျထငျသညျ ။ သူက မှူးအိမျကို တအား ဂရုစိုကျတာဘဲ ။ ဆိုငျထဲမှာ နှဈယောကျ အတူတူ ထိုငျပွီး လဖကျရညျနဲ့ မုနျ့ ထိုငျစားကွတဲ့အခြိနျ သူ့မိနျးမ တှသှေ့ားရငျတော့ ခကျပွီ ဆိုတဲ့ အသိက မှူးအိမျကို စိတျညဈသှားစသေညျ ။ သူက မှူးအိမျရဲ့ အတှငျးစိတျကို ထိုးဖေါကျ သိမွငျသလိုဘဲ ။
“ မှူးအိမျ…ကိုယျ့မိနျးမနဲ့ ကိုယျ လမျးခှဲဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျကွပွီ .. သူ အခု ရနျကုနျကို ပွနျသှားပွီ…” လို့ ရုတျတရကျကွီး ပွောခလြိုကျသညျ ။ မှူးအိမျလညျး သူ့ကို ကွောငျပွီး ကွညျ့နမေိသညျ ။ “ ဟုတျတယျ…သူနဲ့ ကိုယျနဲ့က မိဘတှေ ပေးစားလို့ ယူခဲ့ကွတာလေ ..သမီးလေး ရလာတော့ သမီးလေး မကျြနှာနဲ့ သူဆိုးသမြှ ကိုယျလညျး သညျးခံခဲ့တာ.. အရမျး လှနျလာတော့ ဆကျ သညျးမခံနိုငျတော့ဘူး…. အခုတော့သူလညျး ကိုယျ့ကို ကှဲခငျြတယျလို့ ပွောပွီး ရနျကုနျကို သှားလိုကျပွီ….” မှူးအိမျလညျး သူ ပွောတာကိုဘဲ နားထောငျနမေိရငျး လဖကျရညျကို သောကျနမေိသညျ ။ ဒါပမေယျ့ သူဆကျပွောလာတဲ့ စကားတှကွေောငျ့ မှူးအိမျရဲ့ လဖကျရညျပုဂံလုံး ကို ကိုငျထားတဲ့လကျတှေ တအား တုနျခါသှားလို့ ကမနျးကတမျး ပုဂံလုံးကို စားပှဲပျေါကို ခလြိုကျရသညျ ။ သူက “ မှူးအိမျကို ကိုယျ အရမျးခဈြတယျ…” လို့ ပွောလိုကျလို့ပါ ။ တိမျဂှမျးဆိုငျသညျ “ ရှပွေညျမန်တလေး ထရေးဒငျး ”မှာ အုပျခြုပျမှု ဒါရိုကျတာ ရာထူးနဲ့ လုပျနတော တိမျဂှမျးဆိုငျရဲ့ အဖအေမရေဲ့ ခမျြးသာကွှယျဝမှုနဲ့ မတညျရငျးနှီးမှု ထုထညျကွီးမားမှုကွောငျ့လို့ ဆိုနိုငျသညျ ။ သို့ပမေယျ့သှကျလကျခကျြခွာပွီး ထူးခွားတဲ့ အရညျအခငျြးတှေ ရှိတဲ့ တိမျဂှမျးဆိုငျကွောငျ့ ရှပွေညျမန်တလေး ထရေးဒငျး ကုမ်ပဏီကွီးသညျ အရှိနျအလငျြမွနျမွနျနဲ့ တိုးတကျလာသညျကို ဘယျသူမှ မငွငျးနိုငျပါ ။
တိမျဂှမျးသညျ ဘှဲ့ထူးဆီက ဖုနျးနဲ့ ပွောပွလို့ သူနဲ့ ကိုဉာဏျနဲ့သူ ဘာဂြာကိုငျတဲ့အဆငျ့ ရောကျသှားရတာကို အသေးစိတျ သိလိုကျရသညျ ။ ဘှဲ့ထူး ပွောပွတာတှေ နားထောငျပွီး တိမျဂှမျးလညျး သဘာဝစိတျတှေ ဖွဈမိရပွီး အဲဒီညက ကိုယျ့ပေါငျကွားကို ကိုယျ လကျထညျ့မိခဲ့ရတဲ့ အထိပါဘဲ ။
တိမျဂှမျး ညဥျ့နကျမှ အိပျပြျောသှားခဲ့ရပွီး ရငျထဲမှာ မတငျမကကြွီး ဖွဈနတေဲ့ ခံစားခကျြက မနကျစောစော ဘေးခွံက ကားဟှနျးသံကွောငျ့ နိုးလာရတဲ့အခါ ကိုယျခန်ဓာက လိုလားတောငျ့တနတေဲ့ ခံစားခကျြက ပြောကျကှယျမသှားတဲ့အပွငျ ပိုလို့တောငျ ဆိုးလာတာကို သတိထားမိရသညျ ။ ပေါငျကွားက တသကျလုံး နမေထိလမေထိ ဘယျယောကျြားမှ မထိအောငျ ထားခဲ့တဲ့ မိနျးမကိုယျ အင်ျဂါစပျက ယားယံတဲ့ ဝဒေနာကွောငျ့ လကျနဲ့ ဖိပှတျမိရပွနျသညျ ။
တိမျဂှမျးကို အရမျးကွိုကျနပွေီး ပွနျခဈြဖို့ တဆာဆာနဲ့ တောငျးခံနတေဲ့ ကိုရာကြေျာ့ကိုဘဲ ပွနျခဈြလိုကျရမလား ဖတျြကနဲ အတှေးဝငျ စဉျးစားမိလိုကျသညျ ။ ကိုရာကြျောသညျ လူကောငျးတယောကျပါ ။ ကိုရာကြျောနဲ့ တိမျဂှမျးကုမ်ပဏီခငျြး အကြိုးတူးပူးပေါငျး လုပျနကွေတာ နှဈနှဈလောကျ ရှိပွီ ။ သူကလညျး လူပြို..ကိုယျကလညျး အပြို ဆိုတော့ အနနေီးစပျတော့ ခငျမငျမှုတှေ ပိုခဲ့ကွသညျ ။
ခကျတာက ကိုရာကြျောက သဘောလညျးကောငျး အလုပျလညျးတျောပမေယျ့ အစားအသောကျ မဆငျခွငျနိုငျဘဲ ဘိုကျကရှဲ ပါးက ဖေါငျးနဲ့ အိုဗာဝိတျ ဝွဖိုးနတောက တိမျဂှမျးကို သူနဲ့ ခဈြလိုကျဖို့ တားဆီးနသေညျ ။ အခဈြမှာ မကျြစိ မရှိပါလို့ ဆိုကွပမေယျ့ တိမျဂှမျးသညျ ကိုယျတိုငျက မျောဒယျလေးတယောကျလို ပိနျပါးပါး ကြော့ကြော့လေး လှမျးနတောကို ဂုဏျယူနတေဲ့ မိနျးမ ဆိုတော့ ကိုယျ့ ဘဝဖျေါအဖွဈနဲ့ လကျတှဲမယျ့လူက ကိုယျ့လို တဈတော့ မဟုတျတာတောငျ ကွညျ့ပြျောရှုပြျောတော့ ဖွဈစခေငျြသညျ ။ ကိုရာကြျောကို အစားထိနျးဖို့ အားကစားလုပျဖို့ တိမျဂှမျးက အကွိမျကွိမျ သတိပေး တိုကျတှနျး နားခခြဲ့သညျ ။ကိုရာကြျောသညျ “ အငျးပါ..စိတျခပြါ..လုပျနပွေီ….” ဆိုတာတှေ ပွောနပေမေယျ့ တိမျဂှမျး ကှယျရာကရြငျ စိတျမထိနျးနိုငျဘဲ အစားတှကေို တအားသှပျ ဘီယာတှကေို တကှတျကှတျနဲ့ မော့ နလေို့ ဘယျတော့မှ ဝိတျ မကြ ။ ရာကြျောမငျးမျော ဆိုတာ အထကျမွနျမာပွညျမှာ စီးပှားရေးကို ခြုပျကိုငျထားသူ ဘောစိကွီးတယောကျလို့ လူတှေ သိထားကွသညျ ။ မျော အငျပို့အိပျစပို့ ကုမ်ပဏီရဲ့ မနျနဂေငျြး ဒါရိုကျတာ ဦးမငျးမျောက သူ့သားကို ရှတေ့နျးတငျ ပှဲထုတျလိုကျပွီး အငွိမျးစား ယူခဲ့တဲ့နောကျ ရာကြျောမငျးမျောက အဖအေ့ရိုကျအရာကို ဆကျခံပွီး ကွိုးစား အလုပျလုပျခဲ့တာ တခဏခငျြးမှာဘဲ အောငျမွငျမှုတှေ အလီလီနဲ့ နံမညျထှကျလာခဲ့သညျ ။
သူတို့ရဲ့ မျော ကုမ်ပဏီရဲ့ နံမညျသတငျး မှေးတာကွောငျ့ တိမျဂှမျးတို့ကလညျး သူတို့နဲ့ တှဲပွီး သှငျးကုနျ ထုတျကုနျ လုပျငနျးတှကေို ဖကျစပျ လုပျဖို့ကမျးလှမျးခဲ့သညျ ။ သညျမှာ ကိုရာကြျောမငျးမျောနဲ့ တိမျဂှမျးဆိုငျတို့ တှကွေ့တာပါဘဲ ။ ကိုရာကြျောသညျ ဖွူနု ခြောမောတဲ့ တိမျဂှမျးဆိုငျကို အစစ ဦးစားပေးခဲ့သညျ ။ အနဈနာခံပွီး လုပျခဲ့သညျလို့ ပွောရငျလညျး မမှားပါ ။ တိမျဂှမျးဆိုငျနဲ့ အခုလို နီးနီးစပျစပျ နနေရေတာကိုဘဲ ကိုရာကြျော ကနြေပျနတော ။ တိမျဂှမျးဆိုငျ အတှကျဆို အရာရာကို အဆငျသငျ့ ခကျြခငျြး လုပျပေးသူကွီး ။ တိမျဂှမျးဆိုငျနဲ့ တှဲသှားတှဲလာ လုပျကွရငျ လူတှကေ ပွုံးစိစိနဲ့ ။ ပါးစပျကွမျးတဲ့လူတခြို့က မကွားတကွား“ ဗွူတီ အငျသညျ ဘိဈ ” ( အခြောစားလေးနဲ့ ကိုရုပျဆိုး ) လို့ နောကျပွောငျတာတှေ ရှိသလို တခြို့ကလညျးတိမျဂှမျးနဲ့ မလိုကျဖကျဘူး…လို့ ပျေါတငျကွီး မကျြနှာတညျ့တညျ့ထားပွီး ဝနျေကွတာတှလေညျး ရှိခဲ့သညျ ။ တကယျတော့ ကိုရာကြျောသညျ စိတျနှလုံးကောငျးတဲ့ လူကောငျးတယောကျပါ ။ သူ့လောကျ အလိုကျတသိ ခဈြတတျတဲ့လူလညျး ဒီကမ်ဘာမှာ ရှိလိမျ့မယျ မဟုတျဘူး လို့ သူ့လကျအောကျက သူ့ဝနျထမျးတှကေ ကှယျရာမှာ ပွောလရှေိ့သညျ ။ ကိုရာကြျော သညျ တိမျဂှမျးဆိုငျကို ဘယျလောကျ ဂရုစိုကျသညျ ဆိုတာကို သညျ ဝနျထမျးတှေ အသိဆုံးဘဲလေ ။
တိမျဂှမျးဆိုငျ ကွိုကျတာကို ပါးစပျက ထုတျမပွောဘဲ သူက သိနသေညျ ။ တိမျဂှမျးဆိုငျသညျ ကိုရာကြျောက ဖူးဖူးမှုတျထားတဲ့ ရှမေငျးသမီးလေးဘဲ လို့ တီးတိုး ပွောကွတာကို တိမျဂှမျးဆိုငျ ပွနျကွားရသညျ ။ ကာမဆန်ဒတှေ ပွငျးပွတာနဲ့ဘဲ မရှိသေးတဲ့ ခဈြသူကို ကမနျးကတမျး ရှေးခယျြပဈလိုကျရမှာလား လို့ ကိုယျ့ကိုယျကို ပွနျမေးခှနျးထုတျမိရပွနျသညျ ။ မှူးအိမျဆီကို တိမျဂှမျး ဖုနျးချေါလိုကျသညျ ။ “ မှူးအိမျ….ငါ့စိတျတှေ မပြျောဘူးဟာ…နငျ့ကို ပွောပွခငျြလို့….” “ ပွောလေ…တိမျဂှမျး..ယူ ဘာတှေ စိတျမပြျောစရာတှေ တှနေ့လေို့လဲ..ယူ့လောကျ ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ ဘဝကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့လူ …..ဒီတိုငျးပွညျမှာ ရှိပါ့မလား …. ” “ ငှကွေေးပစ်စညျးဥစ်စာ ပွညျ့စုံတိုငျး စိတျခမျြးသာနိုငျပါ့မလား သူငယျခငျြး…အခုဟာက ကိုယျ.. ကိုယျလေ……ခကျခဲနတော… ပွောရမှာလညျး ရှကျပါတယျကှာ…” “ ဘာလဲ….လငျလိုခငျြနတေယျလို့ ပွောခငျြတာလား…..” “ အငျး…ယူက ဘယျလိုသိနလေဲ…..” “ ဟိတျ..ကိုယျလညျး အဲလိုဘဲလေ…..ကိုယျတို့ ကြောငျးကထဲက လာကွိုကျတဲ့လူတှေ ပေါမြား ရကျနဲ့ ပဲမြားပွီး တယောကျကိုမှ မရှေးခဲ့ကွဘဲ နခေဲ့ကွလို့ အခု ဘှဲ့ထူးတောငျ မိဘ စစေ့ပျတဲ့သူနဲ့ ယူဖို့ လုပျလိုကျရတယျ မဟုတျလား….. ကိုယျလညျး အတူတူပါဘဲ.. အခု ကိုယျ့ကို လာ ခဈြခှငျ့တောငျးနတေဲ့ လူကို ကိုယျ သဘောကပြမေယျ့ သူက အိမျထောငျရှိတယျလေ.. ကိုယျ ယူတို့ကို ပွောပွခဲ့ပွီးသားပါ….”
“ ယူ့အထကျက အရာရှိ ဆိုတာလား….” “ အငျး….ဟုတျတယျ….တိမျဂှမျး..ယူကကော ဟို ပပက ကွောငျ့ စိတျညဈနတောလား….” “ ဟုတျတယျ….”
မှူးအိမျက ကိုရာကြျောကို ပပက လို့ သုံးနှုံးလိုကျတာကွောငျ့ တိမျဂှမျး ရယျခငျြသှားသညျ ။ ပပက ဆိုတာက ( ပုံပကျြကွီး ) လို့ ဆိုလိုတာ ။ သို့ပမေယျ့ ကိုရာကြျောကို အဲလိုကွီး ရကျရကျစကျစကျ မချေါလို ။ မသုံးနှုံးလိုဘူး ။ တိမျဂှမျးကို ကိုရာကြျော တကယျ ခဈြတယျ လို့ တိမျဂှမျး ယုံသညျ ။ သိသညျ ။ “ သူက ကိုယျ့အပျေါ သိပျကောငျးတယျ.. မှူးအိမျ…စိတျသဘောကောငျးတဲ့လူ… တျောလညျး တျောတယျ…” လို့ တိမျဂှမျး လညျး မှူးအိမျကို ပွောပွလိုကျသညျ ။
“ စိတျနှလုံး ကောငျးဖို့ က အဓိကပါ သူငယျခငျြး….” လို့ မှူးအိမျက ပွောသညျ ။ ပွီးတော့ လသေံကို နှိမျ့လိုကျပွီး တိုးတိုးလေး… “ အမှောငျထဲမှာ တှကွေ့ရငျ ပုံပကျြတာ ဝတာ ရုပျဆိုးတာတှေ မရှိတော့ဘူး..သူငယျခငျြး… ယူ့လိုအငျ ဆန်ဒတှကေို သူ ကောငျးကောငျး ဖွညျ့ဆညျးပေးမှာ သခြောပါတယျ……ခိခိခိ…..” လို့ ပွောလိုကျသညျ ။ တိမျဂှမျးလညျး အရှမျးဖေါကျနတေဲ့ မှူးအိမျကို ရယျမောလိုကျမိသညျ ။ သညျ အခိုကျ ကွားဖွတျ ချေါလိုကျတဲ့ ဖုနျးကွောငျ့ ကျောလာအိုငျဒီကို ကွညျ့လိုကျတော့ ကိုရာကြျော ဖွဈနသေညျ ။ ဟှနျ့..အသကျရှညျအုံးမယျ…. သူ့အကွောငျး ပွောနတေုံး သူချေါလာတယျ…. ။
ကိုရာကြျောက တိမျဂှမျး ခိုငျးထားတဲ့ အလုပျတှေ ပွီးပွီ ဆိုတဲ့အကွောငျး သတငျးပို့တာ ။ သူက ခကျြဆိုရငျ နားခှကျက မီးတောကျသညျ ဆိုတဲ့ လူစားမြိုး ။ တထှာပွရငျ တတောငျမွငျသညျ ။ တိမျဂှမျး ဖွဈခငျြတာ လုပျခငျြတာတှကေို ကွိုသိမွငျနိုငျစှမျး ရှိသညျ ။ ကိုရာ ကြျောသညျ တိမျဂှမျးအတှကျ ဘဝလကျတှဲဖျေါ အဖွဈ ရှေးခယျြရမယျ့ လူတယောကျ ဆိုတာကတော့ သခြောနပွေီ ။ သူ့ကိုယျလုံးကိုယျထညျ ကို မကွညျ့ဘဲ သူ့စိတျသဘောထားနဲ့ သူ့ကွံရညျ ဖနျရညျ အရညျအခငျြးကို ကွညျ့ရမညျ လို့ သူငယျခငျြး ဘှဲ့ထူးနဲ့ မှူးအိမျကလညျး တိမျဂှမျးကို အကွံပေးကွသညျ ။ တိမျဂှမျး ဆုံးဖွတျခကျြ ခလြိုကျသညျ ။ ကိုရာကြျောကိုဘဲ ပွနျခဈြလိုကျတော့မညျ လို့ ။ “ ကိုရာကြျော..” “ ဗြာ..တိမျဂှမျး…” “ အားလား…” “ ဗြာ..အဲ..အားပါတယျ…ဘာလုပျပေးရမလဲဟငျ…” “ လာခဲ့….” “ ဟုတျပွီ..အခုလာခဲ့ရမှာလား..” “ အငျးပေါ့…အားရငျ တိမျဂှမျးဆီကို လာခဲ့… အခုပေါ့..” “ ကောငျးပွီ…တိမျဂှမျး….”ကိုရာကြျော မရောကျခငျ တိမျဂှမျးလညျး ရှိုးထုတျရသညျ ။ အလှပွငျ အဝတျအစား လဲပွီးတဲ့အခြိနျ အိမျဖျေါမလေးက ကိုရာကြျော ရောကျပွီ ဆိုတဲ့အကွောငျး လာ သတငျးပို့သညျ ။ ကိုရာကြျောသညျ တိမျဂှမျးအတှကျဆို အမွဲ အဆငျသငျ့ ရှိနသေူပါ ။ အခုလညျး တိမျဂှမျးအိမျကို လာတာ လကျခညျြးဘဲ မလာ ။ စားစရာတှေ စုံနအေောငျ ပါလာသညျ ။ မီးဖိုထဲကို သူကိုယျတိုငျပို့သညျ ။ တိမျဂှမျးကို မွငျတာနဲ့ ပွုံးပွီး.. “ တိမျဂှမျး နကေောငျးလား..ဘယျသှားခငျြလဲ… ဘာစားမလဲ…” လို့ မေးသညျ ။ သူ့စိတျသဘောကွောငျ့ သူ ဝတုတျ ပုံပကျြတာကို တိမျဂှမျး မမွငျမိတော့ဘူး ။ “ ကိုရာကြျောနဲ့ တနရောရာ သှားထိုငျပွီး စကားပွောမလားလို့… စားဖို့က အဓိက မဟုတျပါဘူး ..”
ဆိုငျ အသဈ “ သှားလေ..အခု ခမျြးမွသာစညျ ဖကျမှာ ကျောဖီဆိုငျ အသဈလေးတဆိုငျ ဖှငျ့တယျ… သှားကွညျ့မလား…” “ ဆိုငျအသဈကို မသှားခငျြပါဘူး.. လူတှမြေားတဲ့နရော မသှားခငျြဘူး..လူရှငျးပွီး အေးဆေး စကားပွောလို့ရတဲ့ နရော….” ကိုရာကြျောက စဉျးစားလိုကျပွီး “ ဟုတျပွီ..သိပွီ…..ရှလှေံရပျ ထဲမှာ ဆိုငျတဆိုငျ ရှိတယျ..သနျ့လညျးသနျ့တယျ… ထိုငျလို့ကောငျးတယျ… လူမမြားဘူး….” လို့ ပွောလိုကျသညျ ။ ကိုရာကြျောနဲ့ တိမျဂှမျးဆိုငျတို့ လဖကျရညျဆိုငျလေးကို ရောကျကွတော့ ကိုရာကြျော ပွောတဲ့အတိုငျး ဆိုငျလေးသညျ သနျ့ရှငျးပွီး လူသိပျမမြားတာကို တှရေ့သညျ ။ တိမျဂှမျးဆိုငျလညျး ကိုရာကြျောနဲ့ လဖကျရညျ တခှကျစီ မှာသောကျသညျ ။ ကိုရာကြျောကို “ ကိုရာကြျော..တိမျဂှမျးကို အဖွမေတောငျးတော့ဘူးလား….” လို့ ပွုံးစိစိနဲ့ မေးလိုကျတော့ ကိုရာကြျောလညျး “ တောငျးခငျြတာပေါ့ဗြာ…တိမျဂှမျး စိတျအခနျ့မသငျ့ဖွဈမှာကို ကနြျော စိုးရိမျလို့ပါ.. တိမျဂှမျးကို ကနြျော ဘယျလောကျ ခဈြတယျ ဆိုတာ တိမျဂှမျး သိပါဗြာ…တကယျပါ.. ကနြျောလညျး တိမျဂှမျးကိုသစ်စာရှိရှိ နဲ့ တသကျလုံး စိတျခမျြးသာအောငျ ထားမှာပါ..ယုံပါ တိမျဂှမျးရယျ….” လို့ ပွောလိုကျသညျ ။ တိမျဂှမျးက “ တိမျဂှမျး အဖွပေေးတော့မလို့..” လို့ ရယျပွီး ပွောလိုကျတဲ့အခါ ကိုရာကြျောလညျး
“ အခုလား..” လို့ မေးလိုကျသညျ ။ သူ့မကျြနှာက အံ့အားသငျ့သှားသလို အဖွကေ ကောငျးပါ့မလားလို့ စိုးရိမျသှားတဲ့ပုံလညျး ရှိသညျ ။ “ ကနြေျာ့ကို ပွနျခဈြမှာလားဟငျ..တိမျဂှမျး…” လို့ တုနျရီတဲ့ အသံနဲ့ မေးသညျ ။ တိမျဂှမျးက ပွုံးပွုံးလေးနဲ့ ခေါငျးညှိမျ့ပွလိုကျပွီး “ကိုရာကြေျာ့ကို တိမျဂှမျး ခဈြတယျ….” လို့ ဖွလေိုကျပါသညျ ။ ကိုရာကြျောမှာ ပြျောလှနျးလို့ တုနျနသေညျ ။ မကျြရညျလညျနသေညျ ။ သူလိုခငျြတဲ့ တိမျဂှမျးရဲ့ အခဈြကို သူ ရပွီလေ ။ “ ဝမျးသာလိုကျတာ တိမျဂှမျးရယျ …” ဘှဲ့သညျ ကိုဉာဏျနဲ့ အဲဒီနကေ့ ကိုယျတုံးလုံးတှေ ဖွဈကုနျပွီး သူမစောကျဖုတျကို ကိုဉာဏျက လြာနဲ့ ယကျတာကို ခံလိုကျရပွီး ကိုဉာဏျကို ရှကျနမေိပွီး သူနဲ့ ထပျ မကျြနှာခငျြး မဆိုငျဘဲ နနေခေဲ့သညျ ။ စိတျတှထေကွှပွီး အရှကျကုနျသလို ဖွဈသှားမိတာကို ရှကျနတော ။ သူကတော့ ဘှဲ့နဲ့ ထပျ တှခေ့ငျြလို့ တခြိနျလုံး ဖုနျးဆကျဆကျနသေညျ ။
တိမျဂှမျးဆီက သူ ကိုရာကြျောကို ခဈြသူအဖွဈ ရှေးခယျြလိုကျပွီး ဖွဈကွောငျး ဖုနျးဆကျတဲ့ တခြိနျထဲမှာဘဲ မှူးအိမျကလညျး သူ့အထကျအရာရှိ ဦးဇျောဝငျးသောငျးနဲ့ ခဈြသူ ဘ၀ ရောကျသှားပွီ ဆိုတာကို ဖုနျးချေါပွီး ပွောပွသညျ ။ သူ့သူငယျခငျြးတှေ ရှဆေ့ငျ့နောကျဆငျ့ စှံကုနျတာကို ဘှဲ့လညျး အံ့သွနသေညျ ။
တဖွညျးဖွညျး အသကျကွီးလာကွတဲ့ အပြိုကွီးမမတှေ တငျးခံမထားတော့ဘဲ နီးစပျရာနဲ့ ညိပဈလိုကျကွတာဘဲ လို့ သူ့ဖါသာ ရေ ရှတျနမေိသညျ ။ အငျးလေ..ဘှဲ့ကိုယျတိုငျလညျး ဘာထူးလဲ ။ မိဘစစေ့ပျတဲ့ ကိုဉာဏျကို လကျခံလိုကျတာဘဲ။ ကိုဉာဏျက လကျထပျကွမယျ့နကေို့ သတျမှတျခငျြသညျ ။ နကေ့ောငျးရကျသာ ရှေးတော့မညျ ။ ဘယျဟိုတယျမှာ ဧညျ့ခံပှဲ လုပျမညျကို တိုငျပငျသညျ ။ မင်ျဂလာဆောငျ ဖိတျစာလညျး ရိုကျတော့မညျ ။
သူတို့သုံးယောကျ တိုငျပငျဆုံးဖွတျထားခဲ့တဲ့အတိုငျး လကျမထပျခငျမှာ မန်တလေးမှာ သူတို့ သုံယောကျ ဆုံကွရမှာ ဖွဈလို့ တိမျဂှမျး..မှူးအိမျတို့နဲ့ ဖုနျးပွောတဲ့ အခါ သူတို့ အစီအစဉျကို မကွာခငျ အကောငျအထညျ ဖျေါဖို့ တိုငျပငျကွသညျ ။ မှူးအိမျ သညျ ဦးဇျောဝငျးသောငျးက မိနျးမနဲ့ ကှဲတော့မယျ ဆိုလို့ သူ ကှာရှငျးပွတျစဲတဲ့ အခါကမြှ အဖွပေေးပါရစလေို့ ပွောခဲ့ပမေယျ့ ဘဲကွီးက တစာစာနဲ့ နားပူလှနျးပွီး မိနျးမနဲ့ ဘယျလိုမှ ပွနျမပေါငျးဖွဈတော့ပါဘူး.. ကှဲကွပါပွီ..မကွာခငျ ကှာရှငျးတဲ့ ကိစ်စ လုပျပွီ…ပွနျခဈြပါ မှူးအိမျရယျ ဆိုပွီး အကွိမျကွိမျ ငိုပွသညျ ။ မှူးအိမျကလညျး သူ့ကို စိတျထဲမှာက သဘောကသြညျ ။ သဘောကခြဲ့သညျ ။ မိနျးမနဲ့ ကလေးနဲ့မို့ ဘယျလိုမှ မဖွဈနိုငျလို့ ။ အခုလညျး တကယျ ကှာရှငျးပွီးတဲ့အထိ စောငျ့လိုကျပါအုံးလို့ သူ့ကို ပွောပမေယျ့ သူကအရမျး ပူဆာနလေို့ မှူးအိမျကလညျး စိတျမခိုငျ စိတျပြော့သူမို့ သူ့ကို ခဈြပါတယျ လို့ အဖွပေေးခဲ့သညျ ။ ခဈြသူတှေ လညျး ဖွဈသှားရော ဘဲကွီးက ကဲတကျလာသညျ ။ လဖကျရညျဆိုငျ ထမငျးဆိုငျမှာ အတူတူ ထိုငျစားတာလောကျနဲ့တငျ မကနြေပျနိုငျဘဲ လှတျလှတျလပျလပျ တှကွေ့ရအောငျ..လို့ နားပူနားဆာ လုပျသညျ ။ မှူးအိမျကို ဖကျထားခငျြလို့ပါ.. ဒီထကျ မပိုပါဘူးလို့ ဂတိပေးသညျ ။ မှူးအိမျကလညျး တကယျတော့ ဆနျ့ကငျြဖကျလိငျကို ဆာလောငျမှတျသိပျ နတောပါ ။
သူ ကှာရှငျးပွီးတဲ့အထိ သူနဲ့ လှနျလှနျကြူးကြူး မဖွဈခငျြဘူး ။ ဒါပမေယျ့ သူက ဖကျထားရုံပါ..ပါးလေး နမျးရုံပါ ဆိုပွီး သူ့အိမျကို လိုကျခဲ့ဖို့ ချေါသညျ ။ မှူးအိမျကလညျး နောကျဆုံးတော့ လိုကျသှားမိသညျ ။ လူလညျကွီး ။ မှူးအိမျလညျး သူ့အိမျကို ပါသှားရော ဘဲကွီးက လကျက သှကျသညျ ။ မွနျသညျ ။ စားနကြေ ကွောငျပါးကွီး။ သူ့လကျတှကေ မှူးအိမျရဲ့ ရငျစိုငျထှားထှား တငျးတငျးတှကေို ကောငျးကောငျးကွီး နယျဖတျတော့တာဘဲ ။ နို့သီးခေါငျးလေးတှကေို ကိုငျပွီး ဆှဲထုတျလို့ သူတို့ခမြာ ထောငျထောငျလေးတှေ ထှကျလာကွရသညျ ။ မာကြောတငျးထောငျနကွေတဲ့ နို့သီးခေါငျးလေးတှကေို သူ နမျးသညျ ။ လြာနဲ့ တို့ထိ ကစားသညျ ။ သူ့နှုတျခမျးကွီးတှနေဲ့ ညှပျဆှဲသညျ ။ စုတျသညျ ။. စို့သညျ ။ သူ့ကို “ ကိုဇျောရယျ..တျောပွီ..” လို့ ပွောရငျး သူ့လကျထဲက ရုနျးထှကျဖို့ ကွိုးစားပမေယျ့ သူက အတငျး ဖကျထားသလို သူ့လကျတဖကျကလညျး မှူးအိမျရဲ့ ပေါငျကွားက အကှဲကွောငျးကို ကိုငျပှတျပေးနသေညျ ။ ဒီအတှကေ့လညျး မှူးအိမျရဲ့ ရုနျးကနျမယျ့ စှမျးအငျတှကေို လြော့ကစြသေညျ ။ “ ကိုဇျောရယျ….အို…အငျး…….ဟငျး…… သိပျကဲတာဘဲကှာ……အာ….အို့..ဘာလို့ နှိုကျနရေပွနျတာလဲ….”
သူ့လကျညှိုးက မှူးအိမျရဲ့ စောကျဖုတျထဲကို ထိုးနှိုကျနသေညျ ။ စောကျစိလေးကိုလညျး ပှတျခပြေေးနသေညျ ။ အရညျတှကေ တအား စိမျ့ထှကျနတောအကှဲကွောငျးထဲကနေ ပေါငျခွံတလြှောကျ စီးကလြို့နသေညျ ။ နို့တှကေို စို့လိုကျ စောကျဖုတျကို ကလိလိုကျနဲ့ မှူးအိမျရဲ့ စိတျတှေ မကွှကွှအောငျ သူ နှိုးဆှနသေညျ ။ သူ့ကို ငွငျးပယျနိုငျစှမျး မရှိတော့ ။ သူ့အလိုကို လိုကျမိရပွီ ။ မိနျးမောနတေဲ့ မှူးအိမျလညျး ကိုယျပျေါက အဝတျတှေ တခုပွီးတခု ကြှတျကှာ ကုနျတာကို သိရကျနဲ့ သူ့ကို မတားဆီးနိုငျခဲ့။ ကိုယျတုံးလုံးနဲ့ သူပွုသမြှကို နုနရေတဲ့အဖွဈ ။ အရှကျတရားလညျး ဘယျဆီရောကျနပွေီလဲ မသိ ။ သူက မှူးအိမျရဲ့ လကျထဲကို သူ့ပူနှေးနှေး လီးကို လာထညျ့ပေးသညျ ။ တုတျတုတျခဲခဲ လီးတနျကွီးက ရှညျလှနျးသညျလို့ ထငျမိသညျ ။ သညျဟာကွီးနဲ့ မှူးအိမျရဲ့စောကျဖုတျထဲကို သူထိုးသှငျးတော့မယျ ဆိုတာ စိတျထဲ သိနလေို့ စိတျတှေ တအား လှုပျရှားနသေညျ ။ ပါးစပျက ခဈြတယျ ခဈြတယျ ပွောနတေဲ့ ယောကျြားတှကေ တကယျတော့ လိုးဘဲ လိုးခငျြနကွေပါလား လို့လညျး သဘောပေါကျလိုကျသညျ ။ သူ မှူးအိမျ စောကျဖုတျဝမှာ သူ့လီးထိပျဖြားကို တထေ့ောကျလိုကျသညျ ။ မကွာခငျ ဝငျလာမယျ့ လီးတနျကွီးက မှူးအိမျ စောကျဖုတျထဲ ဆနျ့ပါ့မလား ဆိုတဲ့ အတှေးက ဝငျလာသညျ ။ သှူ မှူးအိမျကို လိုးပွီ ။ မှူးအိမျ အကှဲကွောငျးတလြောကျ သူ့လီးထိပျနဲ့ အပျေါအောကျ စုံခြီဆနျခြီ ပှတျဆှဲနသေညျ ။ ဒါကိုက မှူးအိမျ ရငျတှကေို ဗွောငျးဆနျစတော ။ မှူးအိမျမှာ အရငျက အတှအေ့ကွုံ မရှိဘူး ဆိုတာ သူသိသညျ ။ ဒါကွောငျ့ သူ အရမျးမလောဘူး ။ ဒါကွောငျ့လညျး သူ မှူးအိမျ ကို ဘာဂြာ အပီဆှဲတာ ။ မှူးအိမျရဲ့ အရညျတှရေော သူ့သှားရညျတှရေော စိုစိုရှဲနတေော့ သူ့လီးတနျကွီး ထိုးသှငျးဖို့ ခြောဆီတှေ အပွညျ့ ရှိနပွေီးသား ဖွဈနပွေီ။
မှူးအိမျလညျး လီးနဲ့ အလိုးခံဖို့ကို အပြိုဘဝတခုလုံး စိတျကူးတှေ အမြိုးမြိုး ယဉျခဲ့တာ အခုတော့ တကယျဘဲ လကျတှေ့ လီးနဲ့စကွုံတှရေ့ပွီ ။ စိတျတအား လှုပျရှားရပွီး နာကငျြမှာ ကွောကျခဲ့ တာတှလေညျး သတိမရနိုငျတော့ ။ သညျစိတျတှေ ပွငျးပွလှနျးတော့ လီးကွီးကို ထိုးသှငျးစခေငျြတာ အရမျး ။ သူ့ကို တအားဖကျထားရငျး သူလိုးပေးတာတှကေို ခံနမေိသညျ ။ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ သူလိုးပေးတာတှကေ မွနျလာသညျ ။ သှကျလာပွငျးလာသညျ ။ မှူးအိမျလညျး သူနဲ့ စိတျပါလကျပါ လုပျခငျြလာသညျ ။ အောကျကနေ ကော့ပေး ပငျ့ပေးမိသညျ ။ သူတအား ဆောငျ့ထညျ့လာသညျ ။ မှူးအိမျ ကောငျးသထကျ ကောငျးလာပွီး အကောငျးဆုံးအခြိနျကို တကျလှမျးသှားရတော့ သူ့လကျမောငျးတှေ ပုခုံးတှကေို ကုတျခွဈရငျး တအား အျောမိလိုကျသညျ ။ သူက “မှူး ပွီးသှားလား ”လို့ မေးသညျ ။ မှူးအိမျလညျး ပွီးတယျ ဆိုတဲ့ဟာကို စာအုပျတှထေဲမှာ အပွာကားတှထေဲမှာ ဖတျဖူးကွညျ့ဖူးထားတော့ ဒါဘဲ ဆိုတာ ထငျလိုကျမိတာနဲ့
“အငျး…”လို့ ဖွလေိုကျမိသညျ ။ သူက ဆကျဆောငျ့ ထညျ့နသေညျ ။ ဆကျတိုကျ မွနျမွနျ ဆောငျ့နတော ။ မကွာခငျဘဲ သူလညျး မကျြလုံးတှေ ပိတျထားရငျး တအငျးအငျး ညညျးပွီး သူ့အတနျကွီးကို မှူးအိမျ စောကျဖုတျထဲကနေ ဆှဲထုတျလိုကျသညျ ။ သူ့အတနျထိပျက အပေါကျလေးကနေ ဖွူညဈညဈ အရညျပဈြပဈြတှေ တဖတျြဖတျြနဲ့ ပနျးလှတျတာ မှူးအိမျ ဘိုကျပျေါမှာ အိုငျထှနျးသှားသညျ ။ “ အရမျးကောငျးသှားတယျ..မှူး…..” လို့ သူ တိုးတိုးလေး ပွောပွီး မှူးအိမျရဲ့ ဘေးမှာ သူ လှဲခြ အိပျလိုကျသညျ ။ သူ့တကိုယျလုံး ခြှေးတှေ စိုရှဲနသေညျ ။ မှူးအိမျလညျး တအားကောငျးတာဘဲ လို့ မှူးအိမျ စိတျထဲက ။ပွောလိုကျမိသညျ။
အလွန်ချောလှတဲ့ ကောင်မလေး သုံးယောက် အကြောင်းကို အရင်ဆုံး ပြောပြလိုသည် ။ သူတို့ကတော့ ဘွဲ့…..မှူးအိမ်နဲ့ တိမ်ဂွမ်း တို့ပါဘဲ ။ ပထမဆုံး ပြောပြလိုတာက ဘွဲ့….ရဲ့ အကြောင်း ။ နံမည် အပြည့်အစုံက ဘွဲ့ထူးမောင်မောင် ။ အင်မတန်လှတဲ့ ကောင်မလေး…။ ဆွတ်ဆွတ်ဖြူတဲ့ အသားနဲ့ မျက်လုံး ဝိုင်းဝိုင်းနက်နက်ကြီးတွေနဲ့ ဆံပင်ရှည် မဲမဲဖြောင့်ဖြောင့်သန်သန်တွေကြောင့် မိန်းကလေးတွေ ကြားထဲ ထင်းနေဝင်းနေတဲ့ ကောင်မလေး ။ ကိုယ်လုံးက တောင့်တောင့်ထည်ထည်ကြီး မဟုတ်ပေမယ့် ရှိသင့်တာတွေ လိုအပ်သလောက် ရှိသည် ။ ရင်မို့မို့က အမြဲ အသားပျော့ပျော့ အင်္ကျီတွေကို ဝတ်တတ်လို့ သိပ်မ ကြီးပေမယ့် သိသိသာသာ လှနေသည် ။ ခါးလေးက သေးသည် ။ တင်တွေက သိပ်မကြီး မကားပေမယ့် လှသည် ။ ရုပ်လှရုံတင် မက စာတော်လို့ရယ် ဘွဲ့ အဖေက နံမည်ကြီး ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး တယောက်မို့ရယ်ကြောင့် လူသိများ နံမည်ကြီးသည် ။ ဘွဲ့က ကျောင်းမှာ လမ်းလျှောက်ရင် ခေါင်းကိုငုံ့ပြီး မြန်မြန် သွက်သွက် လျှောက်တတ်သည် ။ ဘွဲ့ကြောင့် မှူးအိမ်နဲ့ တိမ်ဂွမ်း တို့လည်း လမ်းလျှောက်တာ မြန်လာကြသည် ။
သူတို့ သုံးယောက်သည် သည်လို သွက်သွက်လမ်းလျှောက် ကြတာကြောင့်လည်း လူတွေက ပို သတိထားမိကြသည် ။ သတိထားမိကြတော့ နံမည်ကြီးလာသည် ။ အရှိုင်းစား ဝတ်ထားတဲ့ ကောင်မလေး သုံးယောက် သည် တက္ကသိုလ် အမျိုးမျိုးက ကိုကိုကာလသားတွေ အတွက် ပြောစရာလေးတခု ဖြစ်လာ သည် ။ ဘွဲ့တို့ သုံးယောက်ကို မမြင်ဘူးလို့ တခြားတက္ကသိုလ်တွေက ကျောင်းသားတွေက လာကြည့်ကြရသည် ။ ကျောင်းသားအများစုရဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက် တွေထဲမှာ ဘွဲ့တို့ သုံးယောက် နှစ်အတန်ကြာ ရှိနေခဲ့သည် ။ ဘွဲ့တို့ အုပ်စုမှာ ဘွဲ့က အလှဆုံး အချောဆုံးလို့ ကျောင်းနေဖက် ယောက်ျားလေးတွေက သတ်မှတ်တာကို ခံရသည် ။ ဘွဲ့ ထင်တာကတော့ ဘွဲ့တို့ အဖွဲ့မှာ မှူးအိမ်ရော တိမ်ဂွမ်းရော အားလုံး ဘွဲ့လိုဘဲ လှကြသည်လို့ ။ ဘွဲ့သည် သူ့ကို လာချဉ်းကပ် တဲ့ ကောင်လေးတွေကို လက်မခံခဲ့လို့ မာနကြီးသည် မြောက်နေသည် လို့ ကောင် လေးတွေ ကြားထဲမှာ နံမည်ကြီးခဲ့သည် ။
မှူးအိမ် နံမည် အပြည့်အစုံက မှူးအိမ်သူ ။ မှူးအိမ်သူက ဘွဲ့လိုဘဲ အသား အရမ်းဖြူတဲ့ ကောင်မလေး ။ နက်ပြောင်တဲ့ဆံပင်တိုတိုလေးနဲ့ မှူးအိမ်သည် ဂျပန်မလေးတယောက်လို့ ထင်ရသည် ။ မှူးအိမ်ရဲ့ အဖေကလည်း ဘွဲ့ရဲ့ အဖေလိုဘဲ ကြီးမားတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ရာထူးရှိသည် ။ ဘွဲ့လိုဘဲ စာတော်တဲ့ ကောင်မလေး ဖြစ်သည် ။ မှူးအိမ်ကိုလည်း ကြိုက်ကြ လိုက်ကြ ဖန်ကြကြံကြတဲ့ ဘဲတွေက အရမ်းများသည်။ မှူးအိမ်က တယောက်ကိုမှ မျက်နှာသာ မပေးလို့ ဘွဲ့လိုဘဲ မာနသခင်မလေး လို့ နံမည်ပေးကြပြန်သည် ။ တိမ်ဂွမ်း နံမည် အပြည့်အစုံက တိမ်ဂွမ်းဆိုင် ။ တိမ်ဂွမ်းသည် လည်း ဘွဲ့..မှူးအိမ်တို့လိုဘဲ အသားဖြူဖြူ ကိုယ်လုံး လှလှနဲ့ ချောချောလေး ပါ ။ ဘွဲ့နဲ့မှူးအိမ်တို့ထက် တိမ်ဂွမ်းက တင်ပိုကြီးသည် လို့ သူငယ်ချင်း မိန်းကလေးတွေက ပြောကြသည် ။ သို့သော်
သိပ်အကြီးစားကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး ။ တိမ်ဂွမ်းနဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့က မတိမ်းမယိမ်းပါလို့ တိမ်ဂွမ်း ထင်ပါသည် ။ ရွှေလင်ပန်းနဲ့ အချင်းဆေး ရွှေဘုံပေါ်မှာ စံရတဲ့ ကောင်မလေး ။ ချမ်းသာလွန်းတဲ့ မိဘတွေကြောင့် တိမ်ဂွမ်းဆိုင်သည် ဘွဲ့တို့ မှူးအိမ်တို့လိုဘဲ ချောမောလှပတဲ့ ကောင်မလေးတယောက် ဖြစ်သည် ။
တိမ်ဂွမ်းဆိုင်ကို ရယူပိုင်ဆိုင်လိုတာကြောင့် ရူးသွပ်ရတဲ့ လူတွေ အများကြီး ရှိခဲ့သည်လို့ တက္ကသိုလ်တခွင်မှာ နံမည်ကျော်ခဲ့သည် ။ တိမ်ဂွမ်းဆိုင်ကတော့ မောင်ညိုမှိုင်း ဆိုတဲ့ စာတော်တဲ့ ရိုးသား ကြိုးစားတဲ့ ဆင်းရဲသားကျောင်းသားလေး တယောက်ကို ခင်မင်လိုက်သေးသည် ။ သို့ပေမယ့် ချစ်သူ ဘ၀ မရောက်လိုက် ။ မောင်ညိုမှိုင်းသည် ဆင်းရဲတွင်း နက်တဲ့ ဒါဏ်တွေ ပိပြီး ကျောင်း ဆက်မတက်နိုင်ဘဲ တက္ကသိုလ်နယ်မြေကို ကျောခိုင်းသွားခဲ့လို့ တိမ်ဂွမ်းဆိုင်လည်း စိတ်ဝေဒနာကို တော်တော်ဘဲ ခံစားလိုက်ရသည် ။ ဘွဲ့ စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းတော့ မည်လို့ ကြားလိုက်လို့ မှူးအိမ် ဘွဲ့ဆီကို ဖုန်းဆက်လိုက်သည် ။ ဘွဲ့က သူမ စေ့စပ်ပွဲမှာ မှူးအိမ်ကို ရှိစေချင်သည် ။ တိမ်ဂွမ်းလည်း လာမည်လို့ ဘွဲ့က ပြောပြသည် ။
ဘွဲ့နဲ့ မှူးအိမ် ..တိမ်ဂွမ်းတို့က တက္ကသိုလ်မှာ လေးနှစ်တာ ကျောင်းတက်ခဲ့ စာကျက်ခဲ့ တွဲခဲ့ ကဲခဲ့သူတွေပါ ။ အမြဲ တတွဲတွဲ အတူတူစား အတူတူသွားတဲ့ သူတို့သုံးယောက်စလုံးက အချောအမိုက်လေးတွေမို့ ကျောင်းတုံးက သူတို့သုံးယောက်ကို လူသိများခဲ့သည် ။ ကျောင်းသားတွေရဲ့ ပါးစပ်ဖျားမှာ ရေပန်းစားခဲ့တဲ့ သူတို့ သုံးယောက်သည် ကျောင်းသူဘဝမှာ သုံးယောက်ပေါင်းပြီး အပျော်လွန်ခဲ့ကြလို့ သူတို့ကို ချဉ်းကပ်တဲ့ ယောက်ျားတွေ တပုံတခေါင်းကြီး ရှိခဲ့တာကို လျစ်လျူရှုခဲ့ကြတာ ကျောင်းလည်း ပြီးရော သူတို့ သုံးယောက်စလုံး ရည်းစားမရှိကြသေး။ ကျောင်းပြီးသွားတာနဲ့ သူတို့သည် ရွယ်တူ ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ တွေ့ဆုံကြဖို့ လမ်း မရှိသလောက် ဖြစ်ကုန်ပြီး သည်အတိုင်း ဆိုရင် အပျိုကြီးမမတွေ ဘ၀ တွေနဲ့ အရိုးထုတ်ကြရတော့မည် လို့ အချင်းချင်း ဖုန်းပြောကြရင် တွေ့ဆုံကြရင် ဟာသ အဖြစ် ပြောဖြစ်ကြသည် ။ ကျောင်းသူဘဝမှာ အရိုးများတယ် ချေးခါးတယ် လုပ်ပြီး ရွေးနေခဲ့ကြတဲ့ သူတို့ သုံးယောက်ဟာ ကျောင်းလည်းပြီးရော တယောက်တနေရာဆီ အလုပ်ခွင် ဝင်ကြတဲ့အခါ တယောက်နဲ့ တယောက် မတွေ့ဖြစ်ကြတော့ဘဲ များ သောအားဖြင့် ဖုန်းနဲ့ဘဲ ဆက်သွယ်ခဲ့ကြသည် ။ ဒီအခါ “ သယ်ရင်း…ဘဲရပြီလား…” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို တယောက်နဲ့ တယောက် မေးဖြစ်ကြသည် ။ အလုပ်ခွင်တွေမှာ သူတို့ တွေ့ကြုံရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ဖလှယ်ကြတော့ မှူးအိမ်က သူ့အထက်က အရာရှိက မိန်းမနဲ့ ကလေးတွေ ရှိရက်နဲ့ သူမကို ကြိုက်နေလို့ အလုပ်တောင် ထွက်ချင်သည်လို့ စိတ်ပျက်လက်ပျက် ပြောပြသည် ။ တိမ်ဂွမ်းကတော့ သူ့လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် ဖြစ်လာတဲ့ ဘဲက သဘောကောင်းပေမယ့် လူက ဘိုက်ရွှဲရွှဲ ၀၀ဖိုင့်ဖိုင့်ပုပု ဖြစ်နေလို့ ခင်လည်းခင် ဒီထက်တဆင့်တက်ဖို့ရာလည်း အားနာစွာနဲ့ ငြင်းပယ်မိနေသည်လို့ပြောပြသည် ။
ဘွဲ့ကတော့ အလုပ်ခွင်မှာလည်း မတွေ့ ဘယ်မှာမှလည်း ချစ်သူအဖြစ် အိမ်ထောင်ဖက် အဖြစ် လက်တွဲနိုင်မယ့် ဘဲ မတွေ့လို့ အေးအေးဘဲ တကိုယ်တည်းနေလိုက်တော့မယ် လို့ ဆုံးဖြတ်ထားချိန် သမီးကို အိမ်ထောင်ပြုစေချင်တဲ့ မိဘတွေက သူတို့ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေရဲ့ သားတွေထဲ ဘွဲ့နဲ့ လက်ဆက်ပေးဖို့ တယောက်ယောက်များ ရှိလေမလား ဆိုပြီး ရှာပုံတော်ဖွင့်ကြတော့ ပညာလည်းတတ် ထက်မြက်ထူးချွန်သည်လို့ ထင်တဲ့ လူရွယ်တယောက်ကို သူတို့ တွေ့ကြပြီး ဘွဲ့ကို သဘောကျလား လို့ ပြကြသည် ။ ဘွဲ့ကလည်း သည်လူနဲ့ လူချင်း တွေ့ကြည့်ချင်သေးသည်လို့ ပြန်ပြောလိုက်လို့ ဘွဲ့မိဘတွေက သည်လူရဲ့ မိဘတွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး တနေ့မှာ သည်လူနဲ့ ဘွဲ့ကို တွေ့ကြဖို့ စီစဉ်ပေးကြသည် ။ သူ့နံမည်က ဉာဏ်ထက်ဖြိုးဝေ ။ သူက မိဘမျိုးရိုး ဘက်ဂရောင်းရော ပညာ အရည်အချင်း လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရော ဘာမှ ပြောစရာ မရှိသလို ရုပ်ရည်သွင်ပြင်ကလည်း ဘွဲ့နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ လူတယောက် ဖြစ်နေလို့ ဘွဲ့ကလည်းသူနဲ့ တွေ့ကြဖို့ မိဘတွေကို ခေါင်းငြှိမ့်လက်ခံခဲ့သည် ။
ဉာဏ်ထက်ဖြိုးဝေနဲ့သူ့မိဘတွေက ဘွဲ့တို့ အိမ်ကို ညနေစာ စားဖို့ ရောက်လာကြပြီး မိဘတွေက ဉာဏ်ထက် ဖြိုးဝေနဲ့ ဘွဲ့ကို တွေ့ပေးကြသည် ။ သမီးတို့ချင်း စကားပြောကြည့်ကြပေါ့ လို့ မေမေက ပြောသည် ။ ဘွဲ့ လည်း ဉာဏ်ထက်ဖြိုးဝေနဲ့ ဘွဲ့တို့ ခြံအနောက်ဖက်မှာ လမ်းလျှောက်ကြရင်း စကားစပြောဖြစ်သည် ။ ဉာဏ်ထက်ဖြိုးဝေသည် ရုပ်သန့်သလို စိတ်သဘောလည်း ကောင်းမည်လို့ တွေ့တွေ့ချင်း အကဲခတ်မိသည် ။ ဘွဲ့လိုဘဲ ကျောင်းနေတုံးက ချစ်သူ မရှာခဲ့လို့ အခု သူလည်း မိဘက ရှာပေးတာကို လာကြည့်တာ ။ ဘွဲ့နဲ့ စကားပြောလို့ အဆင်ပြေသည် ။ သူတို့ ပြန်သွားတော့ မေမေတို့က ဘယ်လိုသဘောရသလဲ မေးတဲ့အခါ ဘွဲ့လည်း ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိသည် အချိန်နဲနဲတော့ ပေးပါဦးလို့ မေမေ့ကို ပြောလိုက်သည် ။ သည်အချိန်က စပြီးတော့ ရွှေလမ်းငွေလမ်း ပေါက်သွားပြီမို့ ဉာဏ်ထက်ဖြိုးဝေလည်း ဘွဲ့တို့ အိမ်ကို အမြဲ ဝင်ထွက်တော့တာဘဲ ။ ဘွဲ့ကလည်း သူ့ကို ခင်မိလာသလို သူ့အကြောင်းကိုလည်း ဒီထက် ပိုသိချင်လို့ သူနဲ့ အတူတူ ထမင်းစားထွက် ဈေးဝယ်ထွက်ခဲ့သလို သူ့အိမ်ကိုလည်း လိုက်လည်ခဲ့သည် ။ အခုထိ ဉာဏ်ထက် အပေါ်ဘာမှ မကြိုက်တဲ့အချက် မတွေ့မိပါဘူး ။ ဘွဲ့ကို စိတ်လှုပ်ရှားစေတဲ့ လူတယောက်တော့ မဟုတ်ဘူး ။
အိမ်ထောင်ဖက် အဖြစ် ရွေးချယ်ဖို့ ကောင်းတဲ့လူ လို့တော့ ဘွဲ့သိသည် ။ လက်ခံသည် ။ မိဘနှစ်ဖက်စလုံးကလည်း ဒိတ်ဒိတ်ကြဲတွေမို့ အကောင်းဆုံး ဟိုတယ်မှာ ထိပ်ဆုံးအဆင့်နဲ့ မင်္ဂလာပွဲ ကျင်းပကြမည် လို့ စဉ်းစားပြင်ဆင်နေကြသည် ။ မေမေနဲ့ ဖေဖေက ဘွဲ့ကို ဉာဏ်ထက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထပ်မေးကြသည် ။ သမီးဆန္ဒ ဘယ်လိုလဲပေါ့ ။ ဘွဲ့က ဉာဏ်ထက်ကို ငြင်းစရာ မရှိပါဘူး လို့ ဖြေလိုက်သည် ။ မေမေတို့က ဉာဏ်ထက်ရဲ့ မိဘတွေနဲ့ စကားပြော တိုင်ပင်ကြပြီး တရားဝင် စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းတဲ့ ပွဲ လုပ်လိုက်ကြမည်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါသည် ။ ဘွဲ့ စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းတော့မည်လို့ ဘွဲ့က အရင်ဆုံး တွဲဖေါ်တွဲဖက် ချစ်သူငယ်ချင်းတွေကို အကြောင်းကြားလိုက်သည် ။ တိမ်ဂွမ်းဆိုင်က မန္တလေးမှာ မိဘလက်ငုတ် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကို ဦးစီး လုပ်ကိုင်နေသလို မှူးအိမ်က မြစ်ကြီးနားမှာ အလုပ် စဝင်နေသည် ။ နှစ်ယောက်စလုံးက ဘွဲ့ရဲ့ စေ့စပ်ပွဲကို တက်ရောက်ကြမည်လို့ဘွဲ့ကို အကြောင်းပြန်ကြသည် ။ စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းပွဲမှာ ဘယ်လို အဝတ်အစား ဝတ်ကြမည် ဆိုတာကို သူငယ်ချင်း သုံးယောက် တိုင်ပင်ရတာ အေမာ ။ စေ့စပ်ပွဲ မတိုင်ခင် သုံးရက်လောက်ထဲက ရန်ကုန်ကို လာကြဖို့ ဘွဲ့က ခေါ်သည် ။ မှူးအိမ်နဲ့ တိမ် ဂွမ်းတို့က ဘွဲ့ ဖြူရင် လိုက်ဖြူ ဘွဲ့မဲရင် လိုက်မဲသူ အသံတူတဲ့ တကယ့်အရင်းအခြာတွေမို့ ဘွဲ့ဘာပြောပြောလုပ်သည် ။ လက်ခံသည် ။
မှူးအိမ် မြစ်ကြီးနားက ရောက်လာတဲ့အခါ ဘွဲ့က လေယာဉ်ကွင်းက စောင့်ကြိုနေသည် ။ တိမ်ဂွမ်း မန္တလေးကရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ ဘွဲ့နဲ့ မှူးအိမ်တို့နှစ်ယောက်က လေယာဉ်ကွင်းက စောင့်ကြိုသည် ။ သူငယ်ချင်းသုံးယောက် အရမ်းပျော်ကြသည် ။ ဘွဲ့အိမ်မှာ ရှေးဟောင်းနှောင်း ဖြစ် ကျောင်းသူ ဘဝက ဟာတွေကို ပြန်ပြောလို့ မဆုံးအောင်ဘဲ ။ အတူ စားခဲ့တဲ့ အစားအစာတွေ ကို ပြန်စားကြ သည် ။ ဘွဲ့က ဉာဏ်ထက်နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို မိတ်ဆက်ပေးသည် ။
ဉာဏ်ထက်သည် သူတို့ ထင်တာထက် ရုပ်ဖြောင့် သည်လို့ မှူးအိမ်နဲ့ တိမ်ဂွမ်းတို့က ဘွဲ့ကိုပြောကြသည် ။ ဉာဏ်ထက်က ဘွဲ့ရဲ့ ချစ်သူငယ်ချင်းတွေမို့ မှူးအိမ် နဲ့ တိမ်ဂွမ်းတို့ကို အရမ်း ဂရုစိုက်သည် ။ သဘောကောင်းတဲ့ ဉာဏ်ထက်ကို သူတို့နှစ်ယောက် တအား ခင်မင်သွားကြသည် ။ စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းပွဲကို နှစ်ဖက်မိဘတွေ ဆွေမျိုးမိသားစုတွေနဲ့ ဘွဲ့နဲ့ ဉာဏ်ထက်တို့ရဲ့ အရင်းနှီးဆုံး ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်းတွေ တက်ရောက်ကြသည် ။ သုံးလလောက်အတွင်း မင်္ဂလာပွဲ လုပ်မည် လို့ မိဘတွေက ပြောဆိုကြသည် ။ စေ့စပ်ပွဲအပြီး သူငယ်ချင်း သုံးယောက် ကိုယ့်မြို့ကို မပြန်ခင် မင်္ဂလာပွဲမှာ ပြန်ဆုံဖို့ ချိန်းကြသည် ။ တိမ်ဂွမ်းက “ မင်္ဂလာပွဲ မတိုင်ခင်လည်း ဒို့သုံးယောက် ဆုံရအောင်ကွာ…ဘွဲ့ က မကြာခင် အိုရတော့မှာ.. အပျိုဘ၀ နဲ့ ရှိနေတုံး ဒို့ အပျိုသုံးယောက် အတူတူ ပျော်ကြချင်သေးတယ်… ယူတို့နှစ်ယောက် မန်းလေးကို လာခဲ့ကြပါလား….” လို့ ပြောလို့ မှူးအိမ်ကလည်း တိမ်ဂွမ်း ပြောတာကို သဘောတူသည် ။
“ ဟုတ်တယ်..ဘွဲ့..ဒို့ မန်းလေးမှာ ဆုံကြရအောင်.. ယူက ရန်ကုန်က တက်လာ..ဒို့က မြစ်ကြီးနားက ဆင်းခဲ့မယ်.. မင်္ဂလာဆောင်တဲ့အချိန် မရောက်ခင် နောက်ဆုံး အပြတ်ကဲမယ်လေ…” လို့ မှူးအိမ်က ပြောလိုက်သည် ။ တိမ်ဂွမ်းက “ ဟုတ်တယ်..မင်္ဂလာဆောင်ပြီးရင် ယူက ကိုဉာဏ်ထက်ကြီးနဲ့ ဆို ဒို့တတွေနဲ့ အရင်လို မလွတ်လပ်တော့ဘူးလေ…. ဒို့သုံးယောက် ကျောင်းတုံးကလို ကလပ်သွားပြီး အပြတ်က လိုက်ကြရအောင်…” လို့ ပြောသည် ။ ဘွဲ့ကလည်း.. “ ယူတို့ကလည်း ကဲဖို့ဘဲ စဉ်းစားနေကြတယ်… ခုထိကဲချင်တုံး….” လို့ ပြောလိုက်ပေမယ့် သူငယ်ချင်းတွေ ရဲ့ အကြံအစည်ကို အမြဲ လိုက်နာနေကြပါဘဲလေ ။ ဘွဲ့ မင်္ဂလာ မဆောင်ခင် သူငယ်ချင်း သုံးယောက် အပျိုဘ၀ နောက်ဆုံး ပျော်ခြင်း ခရီး ထွက်ကြဖို့ ကိစ္စကို ဉာဏ်ထက်နဲ့ ညစာ ထွက်စားကြရင်း အမှတ်မ ထင် အရေးမကြီးသလို ပြောမိတော့ ဉာဏ်ထက်က မသွားစေချင်တဲ့အမူအရာတွေ ပြလို့ ဘွဲ့လည်း အံ့သြသွားရသည် ။ ဉာဏ်ထက်သည် ဘွဲ့ ဘာလုပ်လုပ် ထောက်ခံသူ ဘွဲ့ ဘာပြောပြော သဘောကျသူလို့ ဘွဲ့က ထင်ထားတာ ။ ထင်ခဲ့တာ ။ ပထမဆုံး အကြိမ် ဉာဏ်ထက်က ဘွဲ့ပြောတာကို လက်မခံချင်တာ ။ ဘွဲ့လည်း ဉာဏ်ထက် ဒီလိုလေး ဖြစ်လိုက်တာနဲ့ဘဲ ဉာဏ်ထက်နဲ့ တသက်လုံး ပေါင်းဖို့လက်ထပ်တဲ့ ကိစ္စကို နဲနဲ ပြန်စဉ်းစားသွားသည် ။ လက်ထပ်ပြီး လင်မယား ဖြစ်ကြရင်ကော ဘွဲ့လုပ်တာတွေကို သူ တားမြစ်နေမှာလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်း က ဘွဲ့ခေါင်းထဲကို ရောက်လာသည် ။
ဘွဲ့က ငယ်ငယ်လေးထဲက မိဘတွေ မကြိုက်တာကို လည်း မလုပ်လို့ မိဘတွေကလည်း ဘွဲ့ကို အလိုလိုက်သည် ။ လိုတာ အကုန်ရတဲ့ ကလေး ဖြစ်ခဲ့သည် ။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ ဖြစ်လာတော့ ပြီးပါလေရော ။ ဖေဖေနဲ့ မေမေက ဘွဲ့ ဖြစ်ချင်တာတွေ ကို အကုန် ဖြစ်စေဘဲ ။ ဘွဲ့ကို ဖူးဖူးမှုတ်ထားသည်လို့ ပြောရမည် ။ ဉာဏ်ထက်က “ ကိုယ်က စိတ်ပူလို့ပါ..ဘွဲ့ကို အမြဲ စောင့်ရှောက်ချင်တာ.. ကိုယ်မပါတော့ စိတ်ပူတယ်…ဝက်ဒင်ပြီးမှဘဲ ကိုယ်နဲ့ ခရီးတွေ ထွက်ကြရင် မကောင်းဘူးလား…” လို့ ပြောသည် ။ ဘွဲ့လည်း သူငယ်ချင်း ခင်မင်တဲ့စိတ်က အရမ်းများတော့ သူပြောတာကို မကြိုက်ဘူး ။ “ ကိုဉာဏ်နဲ့လည်း သွားမယ်..မှူးအိမ်တို့ တိမ်ဂွမ်းတို့နဲ့လည်း သွားမယ်…ဘွဲ့ ကိုဉာဏ်နဲ့ လက်မထပ်သေးခင် ကိုဉာဏ် ဘာမှ ဘွဲ့ကို မချုပ်ချယ်ပါနဲ့…” လို့ နဲနဲ စိတ်တိုတဲ့ အသံနဲ့ သူ့ကို ပြန်ပြောလိုက်မိပြီး ဖါလူဒါသွားသောက်ဖို့ ရှိတာကို ဖျက်လိုက်သည် ။ “ မသောက်တော့ဘူး..အိမ်ဘဲ ပြန်မယ်…” လို့ ပြောလိုက်သည် ။ ဉာဏ်ထက်လည်း ဘွဲ့ စိတ်ဆိုးသွားမှန်း သိလို့ ပြန်ချော့ဖို့ ကြိုးစားသည် ။ ဉာဏ်ထက်သည် စေ့စပ်ပြီးကြပြီ ဖြစ်လို့ အရင်ကထက် ရဲတင်းလာသည် ။ မကြာခင်လည်း မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ လုပ်တော့မှာမို့ ဘွဲ့ကို ဖက်ချင် နမ်းချင် ကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်တာတွေ လုပ်ချင်လာသည် ။ ဘွဲ့လည်း အခု အရွယ် အထိ ယောက်ျားတွေရဲ့ အထိအတွေ့ကို တခါမှ ရဘူးတာ မဟုတ်လို့ သူ့အထိအတွေ့ အကိုင်အတွယ်တွေကို သာယာမိတာ အမှန်ပါဘဲ ။ သူနဲ့ ချစ်သူတွေ မဖြစ်ကြဘဲနဲ့ အခုလို ကိုင်တွယ်ပွတ်သပ် တာ ခံရတာတော့ တမျိုးဘဲ ။ ဉာဏ်ထက်က ဘွဲ့ကို တခါမှ ချစ်ပါတယ်လို့ မပြောခဲ့ဖူးဘူးလေ။ ဉာဏ်ထက်က ဉာဏ်များလာသည် ။ လူကြားထဲကို သိပ် မသွားချင်တော့ဘဲ သူ့အိမ်ကို အခေါ်များလာသည် ။
သူ့အိမ်မှာ ညနေပိုင်းဆိုရင် သူ့မိဘတွေလည်း မရှိကြဘူး ။ ခိုင်းတဲ့ အိမ်ဖေါ်တွေဘာတွေလည်း သူက ရှောင်ခိုင်းထားသလား မသိဘူး။ မတွေ့ဘူး ။ ဘွဲ့ကို သူ့အိမ်ကို ခေါ်သွားရင် စန္တယားတီးချင်တဲ့ ဘွဲ့ကို စန္တယားရှိတဲ့ အခန်းကို ခေါ်သွားသည် ။ ဘွဲ့ စန္တယားတီးတာကို သူ နားထောင်သည် ။ အရမ်းတော်တာဘဲ ဘွဲ့ထူးရယ် ဆိုပြီး ပြောရင်း နမ်းတတ်သည် ။ ဘွဲ့လည်း သူနဲ့ နှစ်ယောက်ထဲ နေရတာ စိတ်လှုပ်ရှားမိရသည် ။ သူက နမ်းလိုက် ဖက်လိုက်နဲ့ ဘွဲ့ပေါင်တွေ ခါး တွေကိုလည်း ကိုင်တတ် ပွတ်တတ်သည်လေ ။ ဒီနေ့လည်း ထုံးစံအတိုင်း ညနေပိုင်း သူ ဘွဲ့ကို အိမ်မှာ လာခေါ်သည် ။ ဘွဲ့တို့ ဒီနေ့ ကိုးမိုင်ဖက်မှာ ကော်ဖီဆိုင် လှလှလေး တဆိုင် ဖွင့်လို့ အစမ်း အနေနဲ့ သွားကြည့်မလို့ တိုင်ပင်ထားကြတာ ။ ဉာဏ်ထက် နဲ့ ဆိုင်လှလှလေးမှာ ကော်ဖီ အကောင်းစားနဲ့ မုန့်အဆန်းတွေ ထိုင် စားသောက် ကြပြီးတော့ သူက “ ဘွဲ့ထူး…ဒီနေ့လေ ကိုယ် ဘွဲ့ထူးရဲ့ ပီယာနို လက်ရာတွေကို နားထောင်ချင်တယ်” လို့ ပြောလို့ ဘွဲ့လည်း
“ ဘယ်ကနေ ဘယ်လို စိတ်ကူးပေါက်လဲ ကိုဉာဏ်..” လို့ သူ့ကို မေးမိသည် ။ သူက “ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် မှာ ဘွဲ့ထူး တင်ထားတဲ့ ပီယာနိုတီးတာတွေ ကိုယ် ပြန်ကြည့်ပြီး အပြင်မှာ ကိုယ်တိုင် နားထောင်ချင်လို့ပါ…” လို့ ပြောသည် ။ အင်း..ဉာဏ်ထက်တော့ ဉာဏ်များပြီ ။ သူ့အိမ်ခေါ်သွားပြီး အဖက်အပွေ့တွေ လုပ်ချင် လို့ ဇာတ်လမ်းထွင်နေတာလို့ ဘွဲ့လည်း သဘောပေါက်လိုက်သည် ။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် သူက ကိုယ့်ခင်ပွန်းလောင်း မကြာခင် လက်ထပ်တော့မယ့် သူဘဲလေ ။
ဘွဲ့က တွန့်တိုနေစရာမရှိပါဘူး ။ လက်ထပ်မယ့်ညကျမှ အပျိုဘဝကို စွန့်လွှတ်မယ် လို့လည်း ရှေးက မြန်မာမိန်းမတွေ လိုလည်း ဘွဲ့က သဘောမထားလိုပါဘူး ။ သူ့ကိုင်တဲ့အခါ နမ်းတဲ့အခါ ဘွဲ့လည်း စိတ်တွေ လှုပ်ရှားမိရတာ အမှန်ပါ ။ သွေးနဲ့ကိုယ် သားနဲ့ ကိုယ်ဘဲလေ ။ မိန်းမတွေမှာက ဒီစိတ်တွေ ယောက်ျား တွေလောက် မပြင်းထန်ရင်သာ ရှိရမယ် ။ မိန်းမတွေလည်း လူဘဲ လေ။ ကာမစိတ် ရှိကြပြီး လိုလားကြတာပါဘဲလေ ။ ဘွဲ့ သူနဲ့ သူ့အိမ်ကို လိုက်လာလို့ ဉာဏ်ထက် တအား ပျော်သွားသည် ။ သူ့အမူအရာက သိသာသည် ။ ဘွဲ့မှာလည်း အပျိုကြီးမမ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်က ညတိုင်း ဖုန်းပြောကြရင် “ ဉာဏ်ထက်နဲ့ ဘာဖြစ်ကြလဲ…” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို အမြဲမေးတတ်လို့ တခါတလေ ပြောစရာ မရှိရင် ကြံဖန်ပြီး လုပ်ဇာတ်ပြောလိုက်မိသည် ။ သူတို့ ကြားချင် နေတာကို ပြောပေးတာပါ ။ ဘွဲ့လည်း အွန်လိုင်းက မြန်မာဆိုက်တွေကို ဝင်လိုက်ပြီး အဲဒီက စာရေးဆရာတွေ ရေးထးတဲ့ အပြာဇာတ်လမ်းလေးတွေကို ဖတ် ပြီး ကိုယ့်ဇာတ်လမ်းလိုလိုနဲ့ ပြောပြလိုက်တာ ။ မှူးအိမ်ဆိုရင် တကယ့်ဘရုတ် ။ “ဘွဲ့ရယ်.. နင့်ဇာတ်လမ်းကြောင့် ငါလည်း မနေနိုင်တော့ဘူး…. လက်တွေ လည်း ဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့…” လို့ ပြောလို့ ရယ်နေကြရသည် ။ ဒီနေ့ညနေ ဉာဏ်ထက်ရဲ့ အိမ်ကို ရောက်သွားတော့ ခြံတံခါး ဖွင့်ပေးမယ့်လူတောင် မရှိဘူး ။ ဉာဏ်ထူး ကိုယ်တိုင် ကားပေါ်က ဆင်းဖွင့်ရသည် ။ တိုက်ကြီးတခုလုံးလည်း တိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက်နေသည် ။
“ ကိုဉာဏ့်အဖေအမေကော…မရှိကြဘူးလား…” “ မရှိကြဘူး..ဘွဲ့ထူး….” တကယ် အမှန်က သူ့မိဘတွေက စင်ကာပူကို ခရီးထွက်နေကြတာ ။ သူက ဘွဲ့ကို မပြောပြဘူး ။ “ အိမ်သားတွေရော…ဘယ်ရောက်နေကြတာလဲ ..” “ မသိဘူး ဘွဲ့ထူး..ကိုယ်မသိဘူး…ရှိမှာပေါ့….” ဘွဲ့ကို စန္တယား ရှိတဲ့ အတွင်း ဧည့်ခန်း ဆီ ကို သူ ခေါ်သွားသည် ။ သူတို့ အတွင်း ဧည့်ခန်းမှာက စန္တယား..အော်ဂင်နဲ့ ကာရာအိုကီ စက်တွေ ရှိသည် ။ မိသားစု အပန်းဖြေတဲ့အခန်းပေါ့ ။ ဘွဲ့ စန္ဒယား တီးသည် ။ တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ဉာဏ်ထက်တို့ အတွင်းဧည့်ခန်းမှာ ဘွဲ့လက်သံက ငြိမ့်ငြိမ့်ညောင်းညောင်းလေး ထွက်ပေါ်နေသည် ။ ဉာဏ်ထက်က ဘွဲ့တီးနေ တာကို ဗီဒီယို ရိုက်သည် ။ ဖေဖေနဲ့ မေမေတို့က ဘွဲ့ကို ငယ်ငယ်လေးထဲက စန္ဒယား သင်ပေးခဲ့သည် ။ အိမ်မှာ ဆရာမ ခေါ်ပြီးသင်တာ ။ ဖေဖေနဲ့ မေမေတို့ ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေထဲမှာ စန္ဒယားမိုးမင်းဆွေ ဆိုတာ ရှိပေမယ့် ဖေဖေကဘွဲ့ကို ယောက်ျားဆရာနဲ့ မသင်ခိုင်းစေချင်လို့ မစ္စစ်ဘဲနက် ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်မကြီးကို ခေါ်ပြီး သင်ခိုင်းခဲ့သည် ။ ဘွဲ့ရဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေက စန္ဒယား ခလုပ်လေးတွေကို နှိပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ဉာဏ်ထက်ရဲ့ လက်တွေက ဘွဲ့ရဲ့ ကိုယ်ပေါ်မှာ နေရာအနှံ့ ပြေးလွှား ဆော့ကစားလာသည် ။ “ ဟိတ်ကိုဉာဏ်…ဘွဲ့တီးလို့ မရတော့ဘူး.. ကဲတယ်ကွာ..လုပ်နဲ့…” လို့ ဟန့်လည်း မရဘူး ။ ဉာဏ်ထက် သည် ခုတလော ကဲလာရဲလာသည် ။ ဉာဏ်ထက်ရဲ့ လက်တဖက်က ဘွဲ့ရဲ့ တင်ပါးအိအိတွေကို ပွတ်နယ်နေသည် ။ ပေါင်တန်တွေဆီ ကိုလည်း ရောက်သွားသည် ။
“ ဘွဲ့..ချစ်တယ်…ကွာ….ကိုယ် ဘွဲ့ကို အရမ်းချစ်တယ်….” ဉာဏ်ထက် ပထမဆုံး ပြောတဲ့ ချစ်စကား ။ ရမက်ပြင်းပြင်းနဲ့ ကိုင်တွယ်နေရင်း ပြောတဲ့စကား ။ ချစ်တယ်လို့ ပြောပေမယ့် ဘွဲ့က သူ့ကို ချစ်သလားလို့လည်း သူ မမေးဘူး ။ သူဦးတည်နေတာ ဘယ်ကိုလည်း ဆိုတာကို ဘွဲ့သိသည် ။ သူ့လက်တွေက ဘွဲ့ အဝတ်တွေကို ချွတ်ဖို့ ကြိုးစားနေသည် ။ ဘွဲ့လည်း သူ့အထိ အတွေ့တွေကြောင့် စိတ်တွေ လှုပ်ရှားလာသည် ။ ကိုယ်ပေါ်က ကွာကျသွားတဲ့ ဖယ်သွားတဲ့ အဝတ်အစားတွေကို ဘွဲ့မဆွဲတားလိုက်မိဘူး ။ အသားဖြူတဲ့ ဉာဏ်ထက်ရဲ့ မျက်နှာနဲ့ နားရွက်ဖျားတွေ ရဲတွတ်နေကြတာကို တွေ့ရသည် ။ ဘွဲ့ရဲ့ ကိုယ် ပေါ်ပိုင်း အဝတ်မဲ့နေပြီ ။ တုန်ချင် ခုန်ချင်နေတဲ့ ဘွဲ့ရဲ့ ရင်သားစိုင်လှလှတွေကို သူ အငမ်းမရ စို့စုတ်သည် ။ “ အို..ကိုဉာဏ်..အင်ဟင်…အိုး….ဟင့်ဟင့်… ကဲတယ်ကွာ…..” ကြွထနေတဲ့ စိတ်တွေကြောင့် မာတင်း ထောင်ထနေကြတဲ့ ဘွဲ့ရဲ့ ရင်သီးဖုလေးတွေကို ဘယ်ဖက်ပြီး ညာဖက် တလှည့်စီ သူစို့နေသည် ။ သူ့လျာက နို့သီးလေးတွေကို ပတ်ခြာလှည့် ယက်နေသည် ။ ဘွဲ့ရဲ့ စိတ်တွေ လွတ်ထွက်သွားသည် ။ သူကလည်း ကိုယ်အောက်ပိုင်းက စကပ်ကို ချွတ်ဖို့ ကြိုးစားသည် ။ ဘွဲ့လည်း ခဲယဉ်းနေတဲ့ သူ့ကိုကူညီပြီး ချွတ်ပေးလိုက်သည် ။ ရှက်လည်း မရှက်နိုင်တော့ဘူး ။
ယောက်ျားတယောက်နဲ့ ဒီလို ဆက်ဆံဖြစ်တာ ပထမဆုံးဘဲ ။ မကြုံစဖူး ကြုံရတာတွေက ဘွဲ့ရဲ့စိတ်တွေကို အမြင့်ဆုံးကို တက်သွားစေသည် ။ စကပ်ကျွတ်သွားတော့ သူ့လက်တွေက ဘွဲ့ရဲ့ ပေါင်တန်ဖြူဖြူတွေပေါ်မှာ ပြေးလွှားနေသလို ဘွဲ့ရဲ့ တင်ပါးအိအိတွေကို အပီအပြင်ကို ဆုပ်နယ်နေသည် ။ ပင်တီလေးရဲ့ ဂွဆုံနေရာကို သူ့လက်ဖဝါး ရောက်လာသည် ။ ဘွဲ့ရဲ့ အမြတ်တနိုး သိမ်းဆည်းထားတဲ့ ရတနာရွှေကြုတ်လေးကို သူ့လက်ချောင်းတွေက ကိုင်မိနေပြီ ။ အရည်တွေက စိုစိုရွှဲနေသည် ။ ရတနာရွှေကြုတ်ဟာ ယားယံလွန်းနေသည် ။ သူကိုင်တာကို ဘွဲ့ ကျေနပ်နေသည် ။ လက်ချောင်းတွေက ရွှေကြုတ်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းသား နုနုလေးတွေကို ဖွဖွလေး ပွတ်သပ်နေသည် ။ ပင်တီလေးကို သူ ချွတ်ဖို့ လုပ်ပြန်သည် ။ ဘွဲ့သူ့ကို မတားမိ ။သူ ချွတ်တာကို ခံလိုက်သည် ။ ဘွဲ့ တကိုယ်လုံး ဘာ အဝတ်မှ မကျန်တော့ ။ ဘွဲ့ကိုယ်လုံးတီး ဖြစ်သွားပြီ ။ သူက ဘွဲ့ကိုယ်လုံးတွေကို တဝြကီး လိုက်ကြည့်နေလို့ ဘွဲ့ ဟန့်တားလိုက်မိသည် ။
“အို..မကြည့်နဲ့…မကြည့်နဲ့….” လို့ အော်လိုက်မိသည် ။ သူက “ တအား လှလို့ပါ ဘွဲ့ရယ်…” လို့ ပြောသည် ။ ဘွဲ့ ပေါင်တန်တွေ ကြားထဲကို သူ ငုံ့နမ်းသည် ။ သူ့နှာခေါင်းက ဘွဲ့ရဲ့ ရတနာရွှေကြုတ် အကွဲကြောင်း တလျောက် နမ်းရှူနေသည် ။ “ အို့….ဘာလို့ နမ်းနေတာလဲ..ကိုဉာဏ်….. အဲလို လုပ်ရလို့လား..ဘုန်းနိမ့်နေလိမ့်မယ်…” သူက ဘွဲ့ပြောတာတွေကို ဂရုမစိုက်တော့တဲ့ အပြင် သူ့လျာကြီးနဲ့ ဘွဲ့အကွဲကြောင်းကို ကော်တင်ယက်နေသည် ။ ဘွဲ့ တကိုယ်လုံး တုန်ခါနေရအောင် သူ့လျာအယက်က ကောင်းသည် ။ တအားကောင်းသည် ။ ဘွဲ့ အမြဲ စိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့ ဘာဂျာမှုတ်တယ် ဆိုတာကြီးကို လက်တွေ့ကျကျ ကြုံနေရပြီကွယ် ။ ရည်းစား ရှိတဲ့ အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်းတွေ ပြောပြတဲ့ ဘာဂျာ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ အင်တာနက်ကအပြာဆိုက်တွေမှာ ကြည့်ဖူးခဲ့တဲ့ ဘာဂျာမှုတ်တာတွေကိုဘဲ စိတ်ကူးယဉ်ပြီး လက်နဲ့ ကိုယ့်ဖါသာ ပွတ်သပ်ပြီး အပျိုပေါက် ဘ၀ ကတည်းက ဖြေဖျောက်ခဲ့သည် ။ အခုတော့ လက်တွေ့ ခံစားနေရပြီ ။
ဉာဏ်ထက်က မကြာခင် လက်ထပ်တော့မယ့် ခင်ပွန်းလောင်းမို့ အစစ လိုက်လျောပေးလိုက်မိသည် ။ စိတ်တွေ တအား ထကြွသွားလို့လည်းပေါ့ ။ ဉာဏ်ထက်က ရွှေကြုတ်ကို အမျိုးမျိုး ကလိပေးနေသည် ။ ရွှေကြုတ်ရဲ့ ရသာဖူးစိလေးကို သူ့လျာထိပ်နဲ့ ရေရေလည်လည် ထိုးဆွ ကော်ပွတ် ကလိလိုက်တာ ဘွဲ့လည်း တအားကိုကောင်းသွားရပြီး အရည်တွေ တရွှမ်းရွှမ်း စိမ့်ထွက်ပြီး တုန်တက်သွားရသည် ။
ဒီအချိန်မှာ တိုက်ရှေ့ဖက်က ကားစက်ရပ်လိုက်သံကို ဘွဲ့တို့ နှစ်ယောက်လုံး ကြားလိုက်ကြရသည် ။ ဟင်…. ဘယ်သူလဲ…။ ဉာဏ်ထက်ရော ဘွဲ့ရော ကိုယ်တုံးလုံးကြီးတွေနဲ့…။ တိုက်အဝင်ဝ တံခါးကြီးက ဘဲလ်ကို တတင်တင်နဲ့ နှိပ်နေတဲ့အသံ ထွက်လာသည် ။ “ ဟာ….ဘယ်သူလဲ…..” ဉာဏ်ထက်သည် လူတယောက်မှ တိုက်နဲ့ ခြံထဲ မရှိအောင် စီစဉ်ထားခဲ့တာ ဖြစ်သည် ။ ဘဲလ် ဆက်တိုက် နှိပ်နေလို့ ဉာဏ်ထက် မတ်တပ် ထရပ်ပြီး ဘောင်းဘီကောက်စွပ် တီရှပ် ကောက်ဝတ်လိုက်ပြီး..“ ဘွဲ့..ကိုယ် ခဏဆင်းကြည့်လိုက်အုံးမယ်..” လို့ ပြောသည် ။ ဘွဲ့လည်း မတ်တပ် ထရပ်လိုက်ပြီး စကပ်နဲ့ အင်္ကျီတွေကို ကောက်ယူ ပြန်ဝတ်လိုက်သည် ။ ဉာဏ်ထက် တိုက်အောက်ကို ရောက်သွားတော့ တံခါးကို ဘဲလ် နှိပ်နေတာက မန္တလေးမှာ နေတဲ့ သူ့အဖေရဲ့ညီမ ဒေါ်လေးသင်ဇာတို့ မိသားစု ဖြစ်နေတာကို တွေ့လိုက်ရသည် ။ “ ဟာ…ဒေါ်လေးတို့ပါလား….” “ ဟုတ်တယ်..သား….. ဘယ်သူမှ မရှိကြဘူးလား ..ခြံစောင့်ကြီး ဦးသာလည်း ဘယ်ရောက်နေလဲ…..” ဉာဏ်ထက်က တံခါး ဖွင့်ပေးလိုက်သည် ။ ဒေါ်လေးတို့ မိသားစုတွေ တိုက်ထဲ ဝင်လာကြတဲ့ အချိန် ဘွဲ့လည်းရေချိုးခန်း ထဲ ဝင်ပြီး အလှပြန်ပြင်နေသည် ။ ဉာဏ်ထက်လည်း လမ်းခရီး အလည်မှာ တန်းလန်းကြီး ရပ်သွားလို့ အခံရ ခက်နေသည် ။ ဘွဲ့လည်း သူ့ကို အခုမှ ရှက်နေ မိသည် ။ သူ့ကို အိမ်ပြန်ပို့ခိုင်းလိုက်သည် ။ ဉာဏ်ထက်လည်း ဘွဲ့ကို ဘာဂျာမှုတ်လိုက်ရတာ ကိုတော့တအား ကျေနပ်နေသည် ။ တောက်.. လှလိုက်တဲ့ စောက်ဖုတ်…လို့ ဉာဏ်ထက်ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ အခါခါ ရေရွတ်နေသည် ။
ဘွဲ့ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ကိုယ်အောက်ပိုင်းတွေ ပေ၇နေတယ်လို့ စိတ်ထဲမှာ မသန့်သလို ဖြစ်နေတာနဲ့ ရေချိုးလိုက်သည် ။ ပေါင်ကြားနေရာတွေ ကို ဆပ်ပြာ နဲ့ အနှံ့ပွတ်ရင်း ရွှေကြုတ်က ရသာဖူးလေးကို စမ်းမိထိမိပွတ်မိတော့ စောစောက ကိုဉာဏ် ယက်ပေးကလိပေးတာတွေကို ပြန်သတိရလာသည် ။ စိတ်တွေ ပြန်ထလာသည် ။ပြန်ကြွလာသည် ။ ရေချိုးခန်း ကြမ်းပြင်မှာ ထိုင်ချရင်း ရွှေကြုတ်ကို ဖိဖိပွတ်မိသည် ။ ကိုဉာဏ်ရဲ့ အတန်ချောင်းကြီးကို ရခါနီးလေး သူ့အဒေါ်ရောက်လာလို့ ထပြေးကြရတာ ။ အင်း.. နဲတဲ့ အတန်ကြီး မဟုတ်ဘူး ။ ဗီဒီယိုတွေထဲမှာဘဲ ယောက်ျားလိင်တန်ကို တွေ့ဖူးခဲ့တာ ဆိုတော့ ဘွဲ့အတွက် အရမ်းကို စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အတွေ့အကြုံပါ ။ ညဖက်ရောက်တော့ မိသားစုအားလုံး ညစာ အတူတူစားကြသည် ။ ဖေဖေနဲ့ မေမေကို မှူးအိမ်.. တိမ်ဂွမ်းတို့နဲ့မန္တလေးမှာ ဆုံပြီး ပျော်ကြမည် ဆိုတာကို ပြောပြလိုက်သည် ။ မေမေနဲ့ ဖေဖေက ဘွဲ့လုပ်ချင်တာတွေကို အကုန်ခွင့်ပြုနေကျပါဘဲလေ ။ ဖေဖေမေမေတို့နဲ့ တီဗီ ခဏ ထိုင်ကြည့်ပြီး ကိုယ့်အခန်းကို ကိုယ် တက်ခဲ့တော့ မှူးအိမ်နဲ့ တိမ်ဂွမ်းတို့ကို ဒီနေ့ တွေ့ကြုံခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ပြောပြချင်တာနဲ့ သူတို့ကို ဖုန်းခေါ်ပြောပြလိုက်သည် ။
မှူးအိမ်တို့ စိတ်ဝင်စားကြပြီး အသေးစိတ်ကို မေးကြတော့တာဘဲ ။ ကိုဉာဏ်ရဲ့ အတန်ကြီး မာမတ်ပြီးထောင်နေတဲ့အကြောင်း ပြောပြတော့ သူတို့ တအား သဘောကျကြသည် ။ သူတို့လည်း ရည်းစားထားမှဖြစ်မယ်လို့ ပြောကြသည် ။ ဘွဲ့ ဘာဂျာအမှုတ်ခံရတာကို ပြောပြတော့ သူတို့လည်း ကြုံချင်လှပြီ လို့ ပြန်ပြောကြပြီးကိုဉာဏ်နဲ့ ထပ်လုပ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းကြသည် ။ မှူးအိမ်သူသည် ခုတလော စိတ်တွေ တအားထနေသည် ။ အလုပ်က ပြန်ရောက်တဲ့အချိန် အွန်လိုင်းကနေ ဗီဒီယိုကားတွေ ကြည့်တဲ့အခါ လိင်စပ်ယှက်တဲ့ အခန်းတွေကို ကြည့်မိရင် သဘာဝ ကာမစိတ်တွေ တအား ထကြွပြီး ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်ကို လိုလားတဲ့ စိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်ပြီးကိုယ့်ဖါသာ လက်နဲ့ ပွတ်သပ်မိရတာ အခါခါဘဲ ။ ညက မှူးအိမ် ကိုယ့်ဖါသာ အာသာဖြေမိရပြန်သည် ။ ဘွဲ့ထူးကြောင့်…။ ဘွဲ့ထူးက သူနဲ့ စေ့စပ်ထားတဲ့ ကိုဉာဏ်ထက်နဲ့ ချိန်းတွေ့တဲ့အကြောင်းတွေကို ဖုန်းဆက် ပြောပြခဲ့သည် ။ကိုဉာဏ်ထက်က ဘာဂျာကိုင်တဲ့အကြောင်း သူ့လီးကို ကိုင်ခိုင်းတဲ့ အကြောင်းတွေကို အသေးစိတ် ပြောပြသည် ။ မှူးအိမ်ကလည်း တအားဆာလောင်လိုလားနေတဲ့သူ ဆိုတော့ တကယ်ကြုံတဲ့ ဘွဲ့ထူးကို သိချင်တာတွေ မေးမိသည် ။ ဒါတွေကို စဉ်းစားမြင်ယောင်တော့ တအား ယားလာပြန်ရော ။ ကိုယ့်အဖုတ်ကို ကိုယ် ပွတ်ပြီး အာသာဖြေမိရပြန်ရော ။
အာသာဖြေတော့ ဦးဇော်ဝင်းသောင်း ရုပ်ကို မြင်ယောင်မိနေသည် ။ အို..ဘာဖြစ်တာလဲ မသိဘူး ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်တင်မိသည် ။ ဦးဇော်ဝင်းသောင်းက မှူးအိမ်ရဲ့ အထက်က အရာရှိ ။ သူက မိန်းမလည်း ရှိသည် ။ ကလေးလည်း ရှိသည် ။ သူက မှူးအိမ်ကို သံယောဇဉ် ညိချင်နေတဲ့သဘော ပြနေတာ ကြာပြီ ။ မှူးအိမ်ကို သူအရမ်းကြိုက်နေသည် ။ သူ့မိန်းမ ရှိရက်နဲ့ ဘာလို့ ဒီလို ဖြစ်နေတာလဲ ဆိုတာကို မကြာခင်ဘဲ မှူးအိမ် သိရသည် ။ သူ့မိန်းမနဲ့သူ တကျက်ကျက် အမြဲ ရန်ဖြစ်ပြီး အဆင်မပြေကြဘူးတဲ့ ။ မှူးအိမ်ကို သူ့အကြောင်း သိတဲ့ ရုံးကရုံးအုပ်မကြီး ဒေါ်ဝေဝက ပြောပြတာ ။
မှူးအိမ်လည်း သူစိုက်စိုက်ကြည့်ရင် အရမ်း ရင်ခုံတာဘဲ ။ သူ့မျက်လုံးတွေက မှူးအိမ်ရဲ့ ဝတ်ထားတဲ့ အဝတ်တွေကို ဖေါက်ထွင်း မြင်သလိုကြီး ခံစားရသည် ။ သူ့အကြည့်တွေက သိပ်ရဲလွန်းသည် ။ မှူးအိမ်ကို ချစ်မိတာထက်လိင်ဆက်ဆံချင်တဲ့ ပုံရှိသည် ။ သူက ပိန်ပိန်ပါးပါး ဘိုက်ချပ်ချပ်နဲ့ ကြည့်ကောင်းတဲ့လူမို့ ကို ယ့်ဖါသာ ပွတ်တဲ့အချိန် သူ့ပုံကို မျက်စိထဲ မြင်ယောင်သွားတာလားတော့ မသိဘူး ။ သူလည်း ကိုဉာဏ်ထက်လိုဘဲ လီးတုတ်တုတ် ရှည်ရှည်ကြီးနဲ့လား မသိ ဘူး ။ တခါတလေ သူက မှူးအိမ်ကို သူနဲ့ ကားမောင်း ထွက်ကြဖို့ ခေါ်သည် ။ မှူးအိမ်မလိုက်ပါဘူး ။ သူ့မိန်းမ သိသွားရင်လည်း မကောင်းဘူးလေ ။ ရုံးမှာ သူက မှူးအိမ်ကို အစားအသောက်တွေ အမြဲကျွေး သည် ။ သူ ထမင်းစားတဲ့ အချိန် မှူးအိမ်ကို လာခေါ်သည် ။ မကောင်းတတ်လို့ သူနဲ့ အတူတူ ထိုင် စားရင် သူက မှူးအိမ် ပုဂံထဲကို ဟင်းတွေ အများကြီး ထည့်ပေးတတ်သည် ။ ရုံးက လူတွေလည်း သူ မှူးအိမ်ကို ကြိုက်နေမှန်း သိနေကြပြီ ။ ဒေါ်ဝေ၀ ဆိုရင် သူ့ကို မှူးအိမ်ရဲ့ ဘဲကြီး လို့ သုံးနှုံးနေပြီ ။ မှူးအိမ်လည်း သူနဲ့ မှူးအိမ်က ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး လို့ဘဲ သူတို့ကို ပြောခဲ့မိသည် ။ တကယ်လည်း အခုအချိန်အထိ ဘာမှ မှ မဟုတ်တာဘဲလေ ။ အိမ်ထောင်ရှိတဲ့ သူနဲ့ ဘာဇာတ်လမ်းမှ မဖြစ်ချင်ပါဘူး ။
သူက နယ်ကို ခရီးထွက်ပြီး ပြန်လာရင် မှူးအိမ်ကို လက်ဆောင်တွေ ပေးသည် ။ မှူးအိမ်လည်း ငြင်းရခက်လို့ သူပေးတာတွေကို ယူထားခဲ့မိသည် ။ ဘွဲ့ထူးရဲ့ တွေ့ကြုံတာတွေကို နားထောင်ခဲ့ရပြီး ယောက်ျားလိုချင်တဲ့ ဝေဒနာကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံစားနေရလို့ အိပ်ရာထဲ ကိုယ့်စောက်ဖုတ်ကို ကိုယ့်ဖါသာ လက်နဲ့ ပွတ်မိနေရသည် ။ အင်းဟင်… ယားလိုက်တာကွယ်….လီးတုတ်တုတ်ကြီးနဲ့ တအားလိုးပေးတာကို ခံချင်လိုက်တာ…..လို့ တိုးတိုးလေး ညည်းနေမိသည် ။ ယားလွန်းတဲ့ ဝေဒနာကြောင့် ညက တော်တော်နဲ့ အိပ်လို့မပျော်ဘူး ။ မနက်ကျတော့ စိတ်ထဲမှာ တခုခု လိုနေသလို ခံစားရသည် ။ ရုံးသွားဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်တဲ့အချိန် ခါတိုင်း အတူတူ ရုံးသွားနေကျ မခင်မြလွင်က သူ နေမကောင်းလို့ ရုံးမတက်ဘူးလို့ ဖုန်းဆက်သည် ။ ဒါကြောင့် မှူးအိမ် တယောက်ထဲဘဲ ရုံးသွားဖို့ လုပ်သည် ။ အိမ်နဲ့ရုံးက သိပ် မဝေးတော့ စက်ဘီးနဲ့ ဘဲ ရုံးသွားသည် ။ အိမ်ထဲက အထွက် အိမ်ရှေ့ကို ကားတစီး ထိုးဆိက်လာတာ တွေ့လိုက်ရသည် ။ ဟင်….။ မှူးအိမ်တို့ ရုံးက ကား ။ ဦးဇော်ဝင်းသောင်းကြီး…။
“ မှူးအိမ်..လာလေ….ကိုယ်လည်း ရုံးသွားးမလို့ဘဲ …. ” “ နေပါစေ….မှူးအိမ် စက်ဘီးနဲ့ဘဲ သွားလိုက်ပါမယ်….” “ ဟာ..မဟုတ်တာကြီး….လာပါ…ကိုယ်နဲ့ဘဲ လိုက်ခဲ့ပါ….” မှူးအိမ်လည်း မကောင်းတတ်လို့ မငြင်းတော့ဘဲ သူ့ကားနဲ့ လိုက်သွားလိုက်သည် ။ သူက ရုံးမရောက်ခင် “ စောသေးတယ်..တခုခု သောက်ရအောင်…” လို့ ပြောပြီး လဖက်ရည်ဆိုင်လေးတခုရှေ့မှာ ထိုးရပ်လိုက်သည် ။ “ မှူးအိမ် မသောက်တော့ပါဘူး…ဆရာ…” လို့ ပြောလည်း မရဘူး ။ အတင်းကို ဆင်းခိုင်းနေတာဘဲ ။လဖက်ရည်ဆိုင်ထဲက လူတွေကလည်း ဝိုင်းကြည့်နေကြသည် လို့ မှူးအိမ်ထင်သည် ။ သူက မှူးအိမ်ကို တအား ဂရုစိုက်တာဘဲ ။ ဆိုင်ထဲမှာ နှစ်ယောက် အတူတူ ထိုင်ပြီး လဖက်ရည်နဲ့ မုန့် ထိုင်စားကြတဲ့အချိန် သူ့မိန်းမ တွေ့သွားရင်တော့ ခက်ပြီ ဆိုတဲ့ အသိက မှူးအိမ်ကို စိတ်ညစ်သွားစေသည် ။ သူက မှူးအိမ်ရဲ့ အတွင်းစိတ်ကို ထိုးဖေါက် သိမြင်သလိုဘဲ ။
“ မှူးအိမ်…ကိုယ့်မိန်းမနဲ့ ကိုယ် လမ်းခွဲဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီ .. သူ အခု ရန်ကုန်ကို ပြန်သွားပြီ…” လို့ ရုတ်တရက်ကြီး ပြောချလိုက်သည် ။ မှူးအိမ်လည်း သူ့ကို ကြောင်ပြီး ကြည့်နေမိသည် ။ “ ဟုတ်တယ်…သူနဲ့ ကိုယ်နဲ့က မိဘတွေ ပေးစားလို့ ယူခဲ့ကြတာလေ ..သမီးလေး ရလာတော့ သမီးလေး မျက်နှာနဲ့ သူဆိုးသမျှ ကိုယ်လည်း သည်းခံခဲ့တာ.. အရမ်း လွန်လာတော့ ဆက် သည်းမခံနိုင်တော့ဘူး…. အခုတော့သူလည်း ကိုယ့်ကို ကွဲချင်တယ်လို့ ပြောပြီး ရန်ကုန်ကို သွားလိုက်ပြီ….” မှူးအိမ်လည်း သူ ပြောတာကိုဘဲ နားထောင်နေမိရင်း လဖက်ရည်ကို သောက်နေမိသည် ။ ဒါပေမယ့် သူဆက်ပြောလာတဲ့ စကားတွေကြောင့် မှူးအိမ်ရဲ့ လဖက်ရည်ပုဂံလုံး ကို ကိုင်ထားတဲ့လက်တွေ တအား တုန်ခါသွားလို့ ကမန်းကတမ်း ပုဂံလုံးကို စားပွဲပေါ်ကို ချလိုက်ရသည် ။ သူက “ မှူးအိမ်ကို ကိုယ် အရမ်းချစ်တယ်…” လို့ ပြောလိုက်လို့ပါ ။ တိမ်ဂွမ်းဆိုင်သည် “ ရွှေပြည်မန္တလေး ထရေးဒင်း ”မှာ အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာ ရာထူးနဲ့ လုပ်နေတာ တိမ်ဂွမ်းဆိုင်ရဲ့ အဖေအမေရဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနဲ့ မတည်ရင်းနှီးမှု ထုထည်ကြီးမားမှုကြောင့်လို့ ဆိုနိုင်သည် ။ သို့ပေမယ့်သွက်လက်ချက်ခြာပြီး ထူးခြားတဲ့ အရည်အချင်းတွေ ရှိတဲ့ တိမ်ဂွမ်းဆိုင်ကြောင့် ရွှေပြည်မန္တလေး ထရေးဒင်း ကုမ္ပဏီကြီးသည် အရှိန်အလျင်မြန်မြန်နဲ့ တိုးတက်လာသည်ကို ဘယ်သူမှ မငြင်းနိုင်ပါ ။
တိမ်ဂွမ်းသည် ဘွဲ့ထူးဆီက ဖုန်းနဲ့ ပြောပြလို့ သူနဲ့ ကိုဉာဏ်နဲ့သူ ဘာဂျာကိုင်တဲ့အဆင့် ရောက်သွားရတာကို အသေးစိတ် သိလိုက်ရသည် ။ ဘွဲ့ထူး ပြောပြတာတွေ နားထောင်ပြီး တိမ်ဂွမ်းလည်း သဘာဝစိတ်တွေ ဖြစ်မိရပြီး အဲဒီညက ကိုယ့်ပေါင်ကြားကို ကိုယ် လက်ထည့်မိခဲ့ရတဲ့ အထိပါဘဲ ။
တိမ်ဂွမ်း ညဥ့်နက်မှ အိပ်ပျော်သွားခဲ့ရပြီး ရင်ထဲမှာ မတင်မကျကြီး ဖြစ်နေတဲ့ ခံစားချက်က မနက်စောစော ဘေးခြံက ကားဟွန်းသံကြောင့် နိုးလာရတဲ့အခါ ကိုယ်ခန္ဓာက လိုလားတောင့်တနေတဲ့ ခံစားချက်က ပျောက်ကွယ်မသွားတဲ့အပြင် ပိုလို့တောင် ဆိုးလာတာကို သတိထားမိရသည် ။ ပေါင်ကြားက တသက်လုံး နေမထိလေမထိ ဘယ်ယောက်ျားမှ မထိအောင် ထားခဲ့တဲ့ မိန်းမကိုယ် အင်္ဂါစပ်က ယားယံတဲ့ ဝေဒနာကြောင့် လက်နဲ့ ဖိပွတ်မိရပြန်သည် ။
တိမ်ဂွမ်းကို အရမ်းကြိုက်နေပြီး ပြန်ချစ်ဖို့ တဆာဆာနဲ့ တောင်းခံနေတဲ့ ကိုရာကျော့်ကိုဘဲ ပြန်ချစ်လိုက်ရမလား ဖျတ်ကနဲ အတွေးဝင် စဉ်းစားမိလိုက်သည် ။ ကိုရာကျော်သည် လူကောင်းတယောက်ပါ ။ ကိုရာကျော်နဲ့ တိမ်ဂွမ်းကုမ္ပဏီချင်း အကျိုးတူးပူးပေါင်း လုပ်နေကြတာ နှစ်နှစ်လောက် ရှိပြီ ။ သူကလည်း လူပျို..ကိုယ်ကလည်း အပျို ဆိုတော့ အနေနီးစပ်တော့ ခင်မင်မှုတွေ ပိုခဲ့ကြသည် ။
ခက်တာက ကိုရာကျော်က သဘောလည်းကောင်း အလုပ်လည်းတော်ပေမယ့် အစားအသောက် မဆင်ခြင်နိုင်ဘဲ ဘိုက်ကရွှဲ ပါးက ဖေါင်းနဲ့ အိုဗာဝိတ် ဝြဖိုးနေတာက တိမ်ဂွမ်းကို သူနဲ့ ချစ်လိုက်ဖို့ တားဆီးနေသည် ။ အချစ်မှာ မျက်စိ မရှိပါလို့ ဆိုကြပေမယ့် တိမ်ဂွမ်းသည် ကိုယ်တိုင်က မော်ဒယ်လေးတယောက်လို ပိန်ပါးပါး ကျော့ကျော့လေး လှမ်းနေတာကို ဂုဏ်ယူနေတဲ့ မိန်းမ ဆိုတော့ ကိုယ့် ဘဝဖေါ်အဖြစ်နဲ့ လက်တွဲမယ့်လူက ကိုယ့်လို တစ်တော့ မဟုတ်တာတောင် ကြည့်ပျော်ရှုပျော်တော့ ဖြစ်စေချင်သည် ။ ကိုရာကျော်ကို အစားထိန်းဖို့ အားကစားလုပ်ဖို့ တိမ်ဂွမ်းက အကြိမ်ကြိမ် သတိပေး တိုက်တွန်း နားချခဲ့သည် ။ကိုရာကျော်သည် “ အင်းပါ..စိတ်ချပါ..လုပ်နေပြီ….” ဆိုတာတွေ ပြောနေပေမယ့် တိမ်ဂွမ်း ကွယ်ရာကျရင် စိတ်မထိန်းနိုင်ဘဲ အစားတွေကို တအားသွပ် ဘီယာတွေကို တကွတ်ကွတ်နဲ့ မော့ နေလို့ ဘယ်တော့မှ ဝိတ် မကျ ။ ရာကျော်မင်းမော် ဆိုတာ အထက်မြန်မာပြည်မှာ စီးပွားရေးကို ချုပ်ကိုင်ထားသူ ဘောစိကြီးတယောက်လို့ လူတွေ သိထားကြသည် ။ မော် အင်ပို့အိပ်စပို့ ကုမ္ပဏီရဲ့ မန်နေဂျင်း ဒါရိုက်တာ ဦးမင်းမော်က သူ့သားကို ရှေ့တန်းတင် ပွဲထုတ်လိုက်ပြီး အငြိမ်းစား ယူခဲ့တဲ့နောက် ရာကျော်မင်းမော်က အဖေ့အရိုက်အရာကို ဆက်ခံပြီး ကြိုးစား အလုပ်လုပ်ခဲ့တာ တခဏချင်းမှာဘဲ အောင်မြင်မှုတွေ အလီလီနဲ့ နံမည်ထွက်လာခဲ့သည် ။
သူတို့ရဲ့ မော် ကုမ္ပဏီရဲ့ နံမည်သတင်း မွှေးတာကြောင့် တိမ်ဂွမ်းတို့ကလည်း သူတို့နဲ့ တွဲပြီး သွင်းကုန် ထုတ်ကုန် လုပ်ငန်းတွေကို ဖက်စပ် လုပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့သည် ။ သည်မှာ ကိုရာကျော်မင်းမော်နဲ့ တိမ်ဂွမ်းဆိုင်တို့ တွေ့ကြတာပါဘဲ ။ ကိုရာကျော်သည် ဖြူနု ချောမောတဲ့ တိမ်ဂွမ်းဆိုင်ကို အစစ ဦးစားပေးခဲ့သည် ။ အနစ်နာခံပြီး လုပ်ခဲ့သည်လို့ ပြောရင်လည်း မမှားပါ ။ တိမ်ဂွမ်းဆိုင်နဲ့ အခုလို နီးနီးစပ်စပ် နေနေရတာကိုဘဲ ကိုရာကျော် ကျေနပ်နေတာ ။ တိမ်ဂွမ်းဆိုင် အတွက်ဆို အရာရာကို အဆင်သင့် ချက်ချင်း လုပ်ပေးသူကြီး ။ တိမ်ဂွမ်းဆိုင်နဲ့ တွဲသွားတွဲလာ လုပ်ကြရင် လူတွေက ပြုံးစိစိနဲ့ ။ ပါးစပ်ကြမ်းတဲ့လူတချို့က မကြားတကြား“ ဗြူတီ အင်သည် ဘိစ် ” ( အချောစားလေးနဲ့ ကိုရုပ်ဆိုး ) လို့ နောက်ပြောင်တာတွေ ရှိသလို တချို့ကလည်းတိမ်ဂွမ်းနဲ့ မလိုက်ဖက်ဘူး…လို့ ပေါ်တင်ကြီး မျက်နှာတည့်တည့်ထားပြီး ဝေန်ကြတာတွေလည်း ရှိခဲ့သည် ။ တကယ်တော့ ကိုရာကျော်သည် စိတ်နှလုံးကောင်းတဲ့ လူကောင်းတယောက်ပါ ။ သူ့လောက် အလိုက်တသိ ချစ်တတ်တဲ့လူလည်း ဒီကမ္ဘာမှာ ရှိလိမ့်မယ် မဟုတ်ဘူး လို့ သူ့လက်အောက်က သူ့ဝန်ထမ်းတွေက ကွယ်ရာမှာ ပြောလေ့ရှိသည် ။ ကိုရာကျော် သည် တိမ်ဂွမ်းဆိုင်ကို ဘယ်လောက် ဂရုစိုက်သည် ဆိုတာကို သည် ဝန်ထမ်းတွေ အသိဆုံးဘဲလေ ။
တိမ်ဂွမ်းဆိုင် ကြိုက်တာကို ပါးစပ်က ထုတ်မပြောဘဲ သူက သိနေသည် ။ တိမ်ဂွမ်းဆိုင်သည် ကိုရာကျော်က ဖူးဖူးမှုတ်ထားတဲ့ ရွှေမင်းသမီးလေးဘဲ လို့ တီးတိုး ပြောကြတာကို တိမ်ဂွမ်းဆိုင် ပြန်ကြားရသည် ။ ကာမဆန္ဒတွေ ပြင်းပြတာနဲ့ဘဲ မရှိသေးတဲ့ ချစ်သူကို ကမန်းကတမ်း ရွေးချယ်ပစ်လိုက်ရမှာလား လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးခွန်းထုတ်မိရပြန်သည် ။ မှူးအိမ်ဆီကို တိမ်ဂွမ်း ဖုန်းခေါ်လိုက်သည် ။ “ မှူးအိမ်….ငါ့စိတ်တွေ မပျော်ဘူးဟာ…နင့်ကို ပြောပြချင်လို့….” “ ပြောလေ…တိမ်ဂွမ်း..ယူ ဘာတွေ စိတ်မပျော်စရာတွေ တွေ့နေလို့လဲ..ယူ့လောက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လူ …..ဒီတိုင်းပြည်မှာ ရှိပါ့မလား …. ” “ ငွေကြေးပစ္စည်းဥစ္စာ ပြည့်စုံတိုင်း စိတ်ချမ်းသာနိုင်ပါ့မလား သူငယ်ချင်း…အခုဟာက ကိုယ်.. ကိုယ်လေ……ခက်ခဲနေတာ… ပြောရမှာလည်း ရှက်ပါတယ်ကွာ…” “ ဘာလဲ….လင်လိုချင်နေတယ်လို့ ပြောချင်တာလား…..” “ အင်း…ယူက ဘယ်လိုသိနေလဲ…..” “ ဟိတ်..ကိုယ်လည်း အဲလိုဘဲလေ…..ကိုယ်တို့ ကျောင်းကထဲက လာကြိုက်တဲ့လူတွေ ပေါများ ရက်နဲ့ ပဲများပြီး တယောက်ကိုမှ မရွေးခဲ့ကြဘဲ နေခဲ့ကြလို့ အခု ဘွဲ့ထူးတောင် မိဘ စေ့စပ်တဲ့သူနဲ့ ယူဖို့ လုပ်လိုက်ရတယ် မဟုတ်လား….. ကိုယ်လည်း အတူတူပါဘဲ.. အခု ကိုယ့်ကို လာ ချစ်ခွင့်တောင်းနေတဲ့ လူကို ကိုယ် သဘောကျပေမယ့် သူက အိမ်ထောင်ရှိတယ်လေ.. ကိုယ် ယူတို့ကို ပြောပြခဲ့ပြီးသားပါ….”
“ ယူ့အထက်က အရာရှိ ဆိုတာလား….” “ အင်း….ဟုတ်တယ်….တိမ်ဂွမ်း..ယူကကော ဟို ပပက ကြောင့် စိတ်ညစ်နေတာလား….” “ ဟုတ်တယ်….”
မှူးအိမ်က ကိုရာကျော်ကို ပပက လို့ သုံးနှုံးလိုက်တာကြောင့် တိမ်ဂွမ်း ရယ်ချင်သွားသည် ။ ပပက ဆိုတာက ( ပုံပျက်ကြီး ) လို့ ဆိုလိုတာ ။ သို့ပေမယ့် ကိုရာကျော်ကို အဲလိုကြီး ရက်ရက်စက်စက် မခေါ်လို ။ မသုံးနှုံးလိုဘူး ။ တိမ်ဂွမ်းကို ကိုရာကျော် တကယ် ချစ်တယ် လို့ တိမ်ဂွမ်း ယုံသည် ။ သိသည် ။ “ သူက ကိုယ့်အပေါ် သိပ်ကောင်းတယ်.. မှူးအိမ်…စိတ်သဘောကောင်းတဲ့လူ… တော်လည်း တော်တယ်…” လို့ တိမ်ဂွမ်း လည်း မှူးအိမ်ကို ပြောပြလိုက်သည် ။
“ စိတ်နှလုံး ကောင်းဖို့ က အဓိကပါ သူငယ်ချင်း….” လို့ မှူးအိမ်က ပြောသည် ။ ပြီးတော့ လေသံကို နှိမ့်လိုက်ပြီး တိုးတိုးလေး… “ အမှောင်ထဲမှာ တွေ့ကြရင် ပုံပျက်တာ ဝတာ ရုပ်ဆိုးတာတွေ မရှိတော့ဘူး..သူငယ်ချင်း… ယူ့လိုအင် ဆန္ဒတွေကို သူ ကောင်းကောင်း ဖြည့်ဆည်းပေးမှာ သေချာပါတယ်……ခိခိခိ…..” လို့ ပြောလိုက်သည် ။ တိမ်ဂွမ်းလည်း အရွှမ်းဖေါက်နေတဲ့ မှူးအိမ်ကို ရယ်မောလိုက်မိသည် ။ သည် အခိုက် ကြားဖြတ် ခေါ်လိုက်တဲ့ ဖုန်းကြောင့် ကော်လာအိုင်ဒီကို ကြည့်လိုက်တော့ ကိုရာကျော် ဖြစ်နေသည် ။ ဟွန့်..အသက်ရှည်အုံးမယ်…. သူ့အကြောင်း ပြောနေတုံး သူခေါ်လာတယ်…. ။
ကိုရာကျော်က တိမ်ဂွမ်း ခိုင်းထားတဲ့ အလုပ်တွေ ပြီးပြီ ဆိုတဲ့အကြောင်း သတင်းပို့တာ ။ သူက ချက်ဆိုရင် နားခွက်က မီးတောက်သည် ဆိုတဲ့ လူစားမျိုး ။ တထွာပြရင် တတောင်မြင်သည် ။ တိမ်ဂွမ်း ဖြစ်ချင်တာ လုပ်ချင်တာတွေကို ကြိုသိမြင်နိုင်စွမ်း ရှိသည် ။ ကိုရာ ကျော်သည် တိမ်ဂွမ်းအတွက် ဘဝလက်တွဲဖေါ် အဖြစ် ရွေးချယ်ရမယ့် လူတယောက် ဆိုတာကတော့ သေချာနေပြီ ။ သူ့ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည် ကို မကြည့်ဘဲ သူ့စိတ်သဘောထားနဲ့ သူ့ကြံရည် ဖန်ရည် အရည်အချင်းကို ကြည့်ရမည် လို့ သူငယ်ချင်း ဘွဲ့ထူးနဲ့ မှူးအိမ်ကလည်း တိမ်ဂွမ်းကို အကြံပေးကြသည် ။ တိမ်ဂွမ်း ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်သည် ။ ကိုရာကျော်ကိုဘဲ ပြန်ချစ်လိုက်တော့မည် လို့ ။ “ ကိုရာကျော်..” “ ဗျာ..တိမ်ဂွမ်း…” “ အားလား…” “ ဗျာ..အဲ..အားပါတယ်…ဘာလုပ်ပေးရမလဲဟင်…” “ လာခဲ့….” “ ဟုတ်ပြီ..အခုလာခဲ့ရမှာလား..” “ အင်းပေါ့…အားရင် တိမ်ဂွမ်းဆီကို လာခဲ့… အခုပေါ့..” “ ကောင်းပြီ…တိမ်ဂွမ်း….”ကိုရာကျော် မရောက်ခင် တိမ်ဂွမ်းလည်း ရှိုးထုတ်ရသည် ။ အလှပြင် အဝတ်အစား လဲပြီးတဲ့အချိန် အိမ်ဖေါ်မလေးက ကိုရာကျော် ရောက်ပြီ ဆိုတဲ့အကြောင်း လာ သတင်းပို့သည် ။ ကိုရာကျော်သည် တိမ်ဂွမ်းအတွက်ဆို အမြဲ အဆင်သင့် ရှိနေသူပါ ။ အခုလည်း တိမ်ဂွမ်းအိမ်ကို လာတာ လက်ချည်းဘဲ မလာ ။ စားစရာတွေ စုံနေအောင် ပါလာသည် ။ မီးဖိုထဲကို သူကိုယ်တိုင်ပို့သည် ။ တိမ်ဂွမ်းကို မြင်တာနဲ့ ပြုံးပြီး.. “ တိမ်ဂွမ်း နေကောင်းလား..ဘယ်သွားချင်လဲ… ဘာစားမလဲ…” လို့ မေးသည် ။ သူ့စိတ်သဘောကြောင့် သူ ဝတုတ် ပုံပျက်တာကို တိမ်ဂွမ်း မမြင်မိတော့ဘူး ။ “ ကိုရာကျော်နဲ့ တနေရာရာ သွားထိုင်ပြီး စကားပြောမလားလို့… စားဖို့က အဓိက မဟုတ်ပါဘူး ..”
ဆိုင် အသစ် “ သွားလေ..အခု ချမ်းမြသာစည် ဖက်မှာ ကော်ဖီဆိုင် အသစ်လေးတဆိုင် ဖွင့်တယ်… သွားကြည့်မလား…” “ ဆိုင်အသစ်ကို မသွားချင်ပါဘူး.. လူတွေများတဲ့နေရာ မသွားချင်ဘူး..လူရှင်းပြီး အေးဆေး စကားပြောလို့ရတဲ့ နေရာ….” ကိုရာကျော်က စဉ်းစားလိုက်ပြီး “ ဟုတ်ပြီ..သိပြီ…..ရွှေလှံရပ် ထဲမှာ ဆိုင်တဆိုင် ရှိတယ်..သန့်လည်းသန့်တယ်… ထိုင်လို့ကောင်းတယ်… လူမများဘူး….” လို့ ပြောလိုက်သည် ။ ကိုရာကျော်နဲ့ တိမ်ဂွမ်းဆိုင်တို့ လဖက်ရည်ဆိုင်လေးကို ရောက်ကြတော့ ကိုရာကျော် ပြောတဲ့အတိုင်း ဆိုင်လေးသည် သန့်ရှင်းပြီး လူသိပ်မများတာကို တွေ့ရသည် ။ တိမ်ဂွမ်းဆိုင်လည်း ကိုရာကျော်နဲ့ လဖက်ရည် တခွက်စီ မှာသောက်သည် ။ ကိုရာကျော်ကို “ ကိုရာကျော်..တိမ်ဂွမ်းကို အဖြေမတောင်းတော့ဘူးလား….” လို့ ပြုံးစိစိနဲ့ မေးလိုက်တော့ ကိုရာကျော်လည်း “ တောင်းချင်တာပေါ့ဗျာ…တိမ်ဂွမ်း စိတ်အခန့်မသင့်ဖြစ်မှာကို ကျနော် စိုးရိမ်လို့ပါ.. တိမ်ဂွမ်းကို ကျနော် ဘယ်လောက် ချစ်တယ် ဆိုတာ တိမ်ဂွမ်း သိပါဗျာ…တကယ်ပါ.. ကျနော်လည်း တိမ်ဂွမ်းကိုသစ္စာရှိရှိ နဲ့ တသက်လုံး စိတ်ချမ်းသာအောင် ထားမှာပါ..ယုံပါ တိမ်ဂွမ်းရယ်….” လို့ ပြောလိုက်သည် ။ တိမ်ဂွမ်းက “ တိမ်ဂွမ်း အဖြေပေးတော့မလို့..” လို့ ရယ်ပြီး ပြောလိုက်တဲ့အခါ ကိုရာကျော်လည်း
“ အခုလား..” လို့ မေးလိုက်သည် ။ သူ့မျက်နှာက အံ့အားသင့်သွားသလို အဖြေက ကောင်းပါ့မလားလို့ စိုးရိမ်သွားတဲ့ပုံလည်း ရှိသည် ။ “ ကျနော့်ကို ပြန်ချစ်မှာလားဟင်..တိမ်ဂွမ်း…” လို့ တုန်ရီတဲ့ အသံနဲ့ မေးသည် ။ တိမ်ဂွမ်းက ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ ခေါင်းညှိမ့်ပြလိုက်ပြီး “ကိုရာကျော့်ကို တိမ်ဂွမ်း ချစ်တယ်….” လို့ ဖြေလိုက်ပါသည် ။ ကိုရာကျော်မှာ ပျော်လွန်းလို့ တုန်နေသည် ။ မျက်ရည်လည်နေသည် ။ သူလိုချင်တဲ့ တိမ်ဂွမ်းရဲ့ အချစ်ကို သူ ရပြီလေ ။ “ ဝမ်းသာလိုက်တာ တိမ်ဂွမ်းရယ် …” ဘွဲ့သည် ကိုဉာဏ်နဲ့ အဲဒီနေ့က ကိုယ်တုံးလုံးတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီး သူမစောက်ဖုတ်ကို ကိုဉာဏ်က လျာနဲ့ ယက်တာကို ခံလိုက်ရပြီး ကိုဉာဏ်ကို ရှက်နေမိပြီး သူနဲ့ ထပ် မျက်နှာချင်း မဆိုင်ဘဲ နေနေခဲ့သည် ။ စိတ်တွေထကြွပြီး အရှက်ကုန်သလို ဖြစ်သွားမိတာကို ရှက်နေတာ ။ သူကတော့ ဘွဲ့နဲ့ ထပ် တွေ့ချင်လို့ တချိန်လုံး ဖုန်းဆက်ဆက်နေသည် ။
တိမ်ဂွမ်းဆီက သူ ကိုရာကျော်ကို ချစ်သူအဖြစ် ရွေးချယ်လိုက်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း ဖုန်းဆက်တဲ့ တချိန်ထဲမှာဘဲ မှူးအိမ်ကလည်း သူ့အထက်အရာရှိ ဦးဇော်ဝင်းသောင်းနဲ့ ချစ်သူ ဘ၀ ရောက်သွားပြီ ဆိုတာကို ဖုန်းခေါ်ပြီး ပြောပြသည် ။ သူ့သူငယ်ချင်းတွေ ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် စွံကုန်တာကို ဘွဲ့လည်း အံ့သြနေသည် ။
တဖြည်းဖြည်း အသက်ကြီးလာကြတဲ့ အပျိုကြီးမမတွေ တင်းခံမထားတော့ဘဲ နီးစပ်ရာနဲ့ ညိပစ်လိုက်ကြတာဘဲ လို့ သူ့ဖါသာ ရေ ရွတ်နေမိသည် ။ အင်းလေ..ဘွဲ့ကိုယ်တိုင်လည်း ဘာထူးလဲ ။ မိဘစေ့စပ်တဲ့ ကိုဉာဏ်ကို လက်ခံလိုက်တာဘဲ။ ကိုဉာဏ်က လက်ထပ်ကြမယ့်နေ့ကို သတ်မှတ်ချင်သည် ။ နေ့ကောင်းရက်သာ ရွေးတော့မည် ။ ဘယ်ဟိုတယ်မှာ ဧည့်ခံပွဲ လုပ်မည်ကို တိုင်ပင်သည် ။ မင်္ဂလာဆောင် ဖိတ်စာလည်း ရိုက်တော့မည် ။
သူတို့သုံးယောက် တိုင်ပင်ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်း လက်မထပ်ခင်မှာ မန္တလေးမှာ သူတို့ သုံယောက် ဆုံကြရမှာ ဖြစ်လို့ တိမ်ဂွမ်း..မှူးအိမ်တို့နဲ့ ဖုန်းပြောတဲ့ အခါ သူတို့ အစီအစဉ်ကို မကြာခင် အကောင်အထည် ဖေါ်ဖို့ တိုင်ပင်ကြသည် ။ မှူးအိမ် သည် ဦးဇော်ဝင်းသောင်းက မိန်းမနဲ့ ကွဲတော့မယ် ဆိုလို့ သူ ကွာရှင်းပြတ်စဲတဲ့ အခါကျမှ အဖြေပေးပါရစေလို့ ပြောခဲ့ပေမယ့် ဘဲကြီးက တစာစာနဲ့ နားပူလွန်းပြီး မိန်းမနဲ့ ဘယ်လိုမှ ပြန်မပေါင်းဖြစ်တော့ပါဘူး.. ကွဲကြပါပြီ..မကြာခင် ကွာရှင်းတဲ့ ကိစ္စ လုပ်ပြီ…ပြန်ချစ်ပါ မှူးအိမ်ရယ် ဆိုပြီး အကြိမ်ကြိမ် ငိုပြသည် ။ မှူးအိမ်ကလည်း သူ့ကို စိတ်ထဲမှာက သဘောကျသည် ။ သဘောကျခဲ့သည် ။ မိန်းမနဲ့ ကလေးနဲ့မို့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်လို့ ။ အခုလည်း တကယ် ကွာရှင်းပြီးတဲ့အထိ စောင့်လိုက်ပါအုံးလို့ သူ့ကို ပြောပေမယ့် သူကအရမ်း ပူဆာနေလို့ မှူးအိမ်ကလည်း စိတ်မခိုင် စိတ်ပျော့သူမို့ သူ့ကို ချစ်ပါတယ် လို့ အဖြေပေးခဲ့သည် ။ ချစ်သူတွေ လည်း ဖြစ်သွားရော ဘဲကြီးက ကဲတက်လာသည် ။ လဖက်ရည်ဆိုင် ထမင်းဆိုင်မှာ အတူတူ ထိုင်စားတာလောက်နဲ့တင် မကျေနပ်နိုင်ဘဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေ့ကြရအောင်..လို့ နားပူနားဆာ လုပ်သည် ။ မှူးအိမ်ကို ဖက်ထားချင်လို့ပါ.. ဒီထက် မပိုပါဘူးလို့ ဂတိပေးသည် ။ မှူးအိမ်ကလည်း တကယ်တော့ ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်ကို ဆာလောင်မွတ်သိပ် နေတာပါ ။
သူ ကွာရှင်းပြီးတဲ့အထိ သူနဲ့ လွန်လွန်ကျူးကျူး မဖြစ်ချင်ဘူး ။ ဒါပေမယ့် သူက ဖက်ထားရုံပါ..ပါးလေး နမ်းရုံပါ ဆိုပြီး သူ့အိမ်ကို လိုက်ခဲ့ဖို့ ခေါ်သည် ။ မှူးအိမ်ကလည်း နောက်ဆုံးတော့ လိုက်သွားမိသည် ။ လူလည်ကြီး ။ မှူးအိမ်လည်း သူ့အိမ်ကို ပါသွားရော ဘဲကြီးက လက်က သွက်သည် ။ မြန်သည် ။ စားနေကျ ကြောင်ပါးကြီး။ သူ့လက်တွေက မှူးအိမ်ရဲ့ ရင်စိုင်ထွားထွား တင်းတင်းတွေကို ကောင်းကောင်းကြီး နယ်ဖတ်တော့တာဘဲ ။ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ကိုင်ပြီး ဆွဲထုတ်လို့ သူတို့ခမျာ ထောင်ထောင်လေးတွေ ထွက်လာကြရသည် ။ မာကျောတင်းထောင်နေကြတဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို သူ နမ်းသည် ။ လျာနဲ့ တို့ထိ ကစားသည် ။ သူ့နှုတ်ခမ်းကြီးတွေနဲ့ ညှပ်ဆွဲသည် ။ စုတ်သည် ။. စို့သည် ။ သူ့ကို “ ကိုဇော်ရယ်..တော်ပြီ..” လို့ ပြောရင်း သူ့လက်ထဲက ရုန်းထွက်ဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် သူက အတင်း ဖက်ထားသလို သူ့လက်တဖက်ကလည်း မှူးအိမ်ရဲ့ ပေါင်ကြားက အကွဲကြောင်းကို ကိုင်ပွတ်ပေးနေသည် ။ ဒီအတွေ့ကလည်း မှူးအိမ်ရဲ့ ရုန်းကန်မယ့် စွမ်းအင်တွေကို လျော့ကျစေသည် ။ “ ကိုဇော်ရယ်….အို…အင်း…….ဟင်း…… သိပ်ကဲတာဘဲကွာ……အာ….အို့..ဘာလို့ နှိုက်နေရပြန်တာလဲ….”
သူ့လက်ညှိုးက မှူးအိမ်ရဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲကို ထိုးနှိုက်နေသည် ။ စောက်စိလေးကိုလည်း ပွတ်ချေပေးနေသည် ။ အရည်တွေက တအား စိမ့်ထွက်နေတာအကွဲကြောင်းထဲကနေ ပေါင်ခြံတလျှောက် စီးကျလို့နေသည် ။ နို့တွေကို စို့လိုက် စောက်ဖုတ်ကို ကလိလိုက်နဲ့ မှူးအိမ်ရဲ့ စိတ်တွေ မကြွကြွအောင် သူ နှိုးဆွနေသည် ။ သူ့ကို ငြင်းပယ်နိုင်စွမ်း မရှိတော့ ။ သူ့အလိုကို လိုက်မိရပြီ ။ မိန်းမောနေတဲ့ မှူးအိမ်လည်း ကိုယ်ပေါ်က အဝတ်တွေ တခုပြီးတခု ကျွတ်ကွာ ကုန်တာကို သိရက်နဲ့ သူ့ကို မတားဆီးနိုင်ခဲ့။ ကိုယ်တုံးလုံးနဲ့ သူပြုသမျှကို နုနေရတဲ့အဖြစ် ။ အရှက်တရားလည်း ဘယ်ဆီရောက်နေပြီလဲ မသိ ။ သူက မှူးအိမ်ရဲ့ လက်ထဲကို သူ့ပူနွေးနွေး လီးကို လာထည့်ပေးသည် ။ တုတ်တုတ်ခဲခဲ လီးတန်ကြီးက ရှည်လွန်းသည်လို့ ထင်မိသည် ။ သည်ဟာကြီးနဲ့ မှူးအိမ်ရဲ့စောက်ဖုတ်ထဲကို သူထိုးသွင်းတော့မယ် ဆိုတာ စိတ်ထဲ သိနေလို့ စိတ်တွေ တအား လှုပ်ရှားနေသည် ။ ပါးစပ်က ချစ်တယ် ချစ်တယ် ပြောနေတဲ့ ယောက်ျားတွေက တကယ်တော့ လိုးဘဲ လိုးချင်နေကြပါလား လို့လည်း သဘောပေါက်လိုက်သည် ။ သူ မှူးအိမ် စောက်ဖုတ်ဝမှာ သူ့လီးထိပ်ဖျားကို တေ့ထောက်လိုက်သည် ။ မကြာခင် ဝင်လာမယ့် လီးတန်ကြီးက မှူးအိမ် စောက်ဖုတ်ထဲ ဆန့်ပါ့မလား ဆိုတဲ့ အတွေးက ဝင်လာသည် ။ သှူ မှူးအိမ်ကို လိုးပြီ ။ မှူးအိမ် အကွဲကြောင်းတလျောက် သူ့လီးထိပ်နဲ့ အပေါ်အောက် စုံချီဆန်ချီ ပွတ်ဆွဲနေသည် ။ ဒါကိုက မှူးအိမ် ရင်တွေကို ဗြောင်းဆန်စေတာ ။ မှူးအိမ်မှာ အရင်က အတွေ့အကြုံ မရှိဘူး ဆိုတာ သူသိသည် ။ ဒါကြောင့် သူ အရမ်းမလောဘူး ။ ဒါကြောင့်လည်း သူ မှူးအိမ် ကို ဘာဂျာ အပီဆွဲတာ ။ မှူးအိမ်ရဲ့ အရည်တွေရော သူ့သွားရည်တွေရော စိုစိုရွှဲနေတော့ သူ့လီးတန်ကြီး ထိုးသွင်းဖို့ ချောဆီတွေ အပြည့် ရှိနေပြီးသား ဖြစ်နေပြီ။
မှူးအိမ်လည်း လီးနဲ့ အလိုးခံဖို့ကို အပျိုဘဝတခုလုံး စိတ်ကူးတွေ အမျိုးမျိုး ယဉ်ခဲ့တာ အခုတော့ တကယ်ဘဲ လက်တွေ့ လီးနဲ့စကြုံတွေ့ရပြီ ။ စိတ်တအား လှုပ်ရှားရပြီး နာကျင်မှာ ကြောက်ခဲ့ တာတွေလည်း သတိမရနိုင်တော့ ။ သည်စိတ်တွေ ပြင်းပြလွန်းတော့ လီးကြီးကို ထိုးသွင်းစေချင်တာ အရမ်း ။ သူ့ကို တအားဖက်ထားရင်း သူလိုးပေးတာတွေကို ခံနေမိသည် ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူလိုးပေးတာတွေက မြန်လာသည် ။ သွက်လာပြင်းလာသည် ။ မှူးအိမ်လည်း သူနဲ့ စိတ်ပါလက်ပါ လုပ်ချင်လာသည် ။ အောက်ကနေ ကော့ပေး ပင့်ပေးမိသည် ။ သူတအား ဆောင့်ထည့်လာသည် ။ မှူးအိမ် ကောင်းသထက် ကောင်းလာပြီး အကောင်းဆုံးအချိန်ကို တက်လှမ်းသွားရတော့ သူ့လက်မောင်းတွေ ပုခုံးတွေကို ကုတ်ခြစ်ရင်း တအား အော်မိလိုက်သည် ။ သူက “မှူး ပြီးသွားလား ”လို့ မေးသည် ။ မှူးအိမ်လည်း ပြီးတယ် ဆိုတဲ့ဟာကို စာအုပ်တွေထဲမှာ အပြာကားတွေထဲမှာ ဖတ်ဖူးကြည့်ဖူးထားတော့ ဒါဘဲ ဆိုတာ ထင်လိုက်မိတာနဲ့
“အင်း…”လို့ ဖြေလိုက်မိသည် ။ သူက ဆက်ဆောင့် ထည့်နေသည် ။ ဆက်တိုက် မြန်မြန် ဆောင့်နေတာ ။ မကြာခင်ဘဲ သူလည်း မျက်လုံးတွေ ပိတ်ထားရင်း တအင်းအင်း ညည်းပြီး သူ့အတန်ကြီးကို မှူးအိမ် စောက်ဖုတ်ထဲကနေ ဆွဲထုတ်လိုက်သည် ။ သူ့အတန်ထိပ်က အပေါက်လေးကနေ ဖြူညစ်ညစ် အရည်ပျစ်ပျစ်တွေ တဖျတ်ဖျတ်နဲ့ ပန်းလွှတ်တာ မှူးအိမ် ဘိုက်ပေါ်မှာ အိုင်ထွန်းသွားသည် ။ “ အရမ်းကောင်းသွားတယ်..မှူး…..” လို့ သူ တိုးတိုးလေး ပြောပြီး မှူးအိမ်ရဲ့ ဘေးမှာ သူ လှဲချ အိပ်လိုက်သည် ။ သူ့တကိုယ်လုံး ချွေးတွေ စိုရွှဲနေသည် ။ မှူးအိမ်လည်း တအားကောင်းတာဘဲ လို့ မှူးအိမ် စိတ်ထဲက ။ပြောလိုက်မိသည်။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged သဒ်ဒါလှနျတဏှာကြှံ